February 2017 | Language Century Language Century
Online ပေါ်မှာ Like ဗုံးကြဲတဲ့ သူငယ်ချင်းများ။
9:08 PM C-Dialogue , Chinese
သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ထဲမှာ သင်တင်သမျှ post တွေကို အမြဲတမ်း Like ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး ရှိပါသလား။
☞ Zhège zhōumò tiānqì búcuò, nǐ xiǎng qù páshān ma?
☞ ကျဲ့hကဲာ့ကျိုးhမော့ ထျန်းချိ ပူဆော့ နီးရှန်(င်)ချွိ ဖာရှန်းh မား
☞ ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရာသီဥတု မဆိုးဘူး၊ မင်း တောင်သွားတက်ချင်လား။
☞ Hǎo zhǔyì, hǎojiǔ méi páshān le. Zài jiào jǐge péngyǒu gēn wǒmen yìqǐ qù ba!
☞ ဟောင်းကျူhယိ ဟောင်းကျို မေးဖာရှန်းhလဲာ့ ဇိုက်zကျောက် ကျီကဲာ့ဖဲင်း(င်)ယို ကဲင်းဝေါ်မဲင် ယိချီချွိပါ့
☞ အကြံကောင်းပဲ၊ တောင်မတက်ရတာ အတော်ကြာပြီ။ သူငယ်ချင်း လေးငါးယောက်လောက် ထပ်ခေါ်ပြီး အတူတူ သွားကြမယ်။
☞ Wǒ wènwen Bǎoluó hé Ãnnī.
☞ ဝေါ်ဝဲင့်ဝဲင့် ပေါင်လော် ဟဲယ် အန်းနီး
☞ ငါ Paul နဲ့ Annie ကို မေးကြည့်လိုက်မယ်။
☞ Èn, tāmen zuì xǐhuan páshān le. Nǐ zěnme bú wèn wen Xiǎomíng?
☞ အဲင့် ထားမဲင် ဇွေ့zရှီဟွမ်း ဖာရှန်းhလဲာ့ နီးဇဲင်zမဲာ့ ပူဝဲင့်ဝဲင့် ရှောင်မျင်(င်)
☞ အင်း၊ သူတို့က တောင်တက်ရတာ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ရှောင်မိန်ကို မင်း ဘာလို့ မမေးတာလဲ။
☞ È, qíshí wǒ gēn tā bú shì hěn shú.
☞ အဲာ့ ချီးရှီh ဝေါ်ကဲင်းထား ပူရှစ်h ဟဲင်ရှူh
☞ အင်း၊ တကယ်တော့ ငါနဲ့သူက အရမ်း မရင်းနှီးဘူး။
☞ Zhēnde ma? Wǒ chángchang kàndào tā zài Facebook shang gěi nǐ fā de dōngxi diǎnzàn.
☞ ကျဲင်းhတဲ့မား ဝေါ်ချန်းh(င်)ချန်h(င်)ခန့်တောက် ထားဇိုက်z Facebook ရှန့်h(င်) ကေ နီဖားfတဲ့တုံး(င်)ရှိ တျန်ဇန့်z
☞ တကယ်လား။ Facebook ပေါ်မှာ မင်းတင်တဲ့ post တွေကို သူ Like ပေးတာ ငါ အမြဲတွေ့ပါတယ်။
☞ Shìde, wǒ yě gěi tā diǎnzàn. Búguò zhǐ shì diǎnzàn, cónglái méiyǒu zhēnzhèng liáo guo tiān.
☞ ရှစ်hတဲ့ ဝေါယဲကေထား တျန်ဇန့်z ပူကော့ ကျီhရှစ်h တျန်ဇန့်z ဆုံး(င်)လိုင်မေးယို ကျဲင်းhကျဲင့်h(င်) လျောင်ကော့ထျန်း
☞ ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်း သူ့ကို Like ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Like ပေးရုံသက်သက်ပဲ၊ စကားတောင် ကောင်းကောင်းမပြောဖူးပါဘူး။
☞ Hǎo ba, wǒ yǐwéi nǐmen shì hǎo péngyǒu ne.
☞ ဟောင်ပါ့ ဝေါယီဝေ နီမဲင်းရှစ်h ဟောင်ဖဲင်း(င်)ယို နဲ
☞ ကောင်းပါပြီ၊ မင်းတို့ကို သူငယ်ချင်းတွေလို့ ငါထင်မိတာပါ။
☞ Shuō shíhuà, Facebook shang hǎoduō péngyǒu dōu zhǐ shì hùxiāng diǎnzàn, búsuàn zhēnde hǎo péngyǒu. Wǒmen jiào zhèyàng de péngyǒu "diǎnzàn zhī jiāo".
☞ ရှောh ရှီhဟွာ့ Facebook ရှန့်h(င်) ဟောင်တောဖဲင်း(င်)ယိုတိုး ကျီhရှစ်h ဟုရှမ်း(င်)တျန်ဇန့်z ပူစွမ့် ကျဲင်းhတဲ့ ဟောင်ဖဲင်း(င်)ယို ဝေါ်မဲင်ကျောက် ကျဲ့hယန့်(င်)တဲ့ ဖဲင်း(င်)ယို "တျန်ဇန့်zကျီးhကျောင်း"
☞ ပြောရရင်တော့၊ Facebook ပေါ်က သူငယ်ချင်းအားလုံးက Like တွေပဲ အပြန်အလှန် ပေးနေကြတာ၊ သူငယ်ချင်းအစစ်လို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးကို ငါတို့က "Like ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း 点赞之交 " လို့ ခေါ်တယ်လေ။
☞ Hā hā, zhège cí yǒu yìsī. Wǒ de Facebook shang yě yǒu yìxiē "diǎnzàn zhī jiāo".
☞ ဟားဟား ကျဲ့hကဲာ့ဆေ ယိုယိစီး ဝေါ်တဲ့ Facebook ရှန့်h(င်) ယဲယို ယိရှဲ "တျန်ဇန့်zကျီးhကျောင်း"
☞ ဟားဟား၊ ဒီစကားလုံးက အဓိပ္ပာယ် ရှိတယ်။ ငါ့ Facebook ထဲမှာလည်း "Like ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း 点赞之交 " တချို့ ရှိပါတယ်။
Online ပျေါမှာ Like ဗုံးကွဲတဲ့ သူငယျခငျြးမြား။
သငျ့ရဲ့ Facebook အကောငျ့ထဲမှာ သငျတငျသမြှ post တှကေို အမွဲတမျး Like ပေးတဲ့ သူငယျခငျြးမြိုး ရှိပါသလား။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ကြိုးhမော့ ထနျြးခြိ ပူဆော့ နီးရှနျ(ငျ)ခြှိ ဖာရှနျးh မား
☞ ဒီစနေ၊ တနင်ျဂနှေ ရာသီဥတု မဆိုးဘူး၊ မငျး တောငျသှားတကျခငျြလား။
☞ ဟောငျးကြူhယိ ဟောငျးကြို မေးဖာရှနျးhလဲာ့ ဇိုကျzကြောကျ ကြီကဲာ့ဖဲငျး(ငျ)ယို ကဲငျးဝျေါမဲငျ ယိခြီခြှိပါ့
☞ အကွံကောငျးပဲ၊ တောငျမတကျရတာ အတျောကွာပွီ။ သူငယျခငျြး လေးငါးယောကျလောကျ ထပျချေါပွီး အတူတူ သှားကွမယျ။
☞ ဝျေါဝဲငျ့ဝဲငျ့ ပေါငျလျော ဟဲယျ အနျးနီး
☞ ငါ Paul နဲ့ Annie ကို မေးကွညျ့လိုကျမယျ။
☞ အဲငျ့ ထားမဲငျ ဇှေ့zရှီဟှမျး ဖာရှနျးhလဲာ့ နီးဇဲငျzမဲာ့ ပူဝဲငျ့ဝဲငျ့ ရှောငျမငျြ(ငျ)
☞ အငျး၊ သူတို့က တောငျတကျရတာ အကွိုကျဆုံးပဲ။ ရှောငျမိနျကို မငျး ဘာလို့ မမေးတာလဲ။
☞ အဲာ့ ခြီးရှီh ဝျေါကဲငျးထား ပူရှဈh ဟဲငျရှူh
☞ အငျး၊ တကယျတော့ ငါနဲ့သူက အရမျး မရငျးနှီးဘူး။
☞ ကြဲငျးhတဲ့မား ဝျေါခနျြးh(ငျ)ခနျြh(ငျ)ခနျ့တောကျ ထားဇိုကျz Facebook ရှနျ့h(ငျ) ကေ နီဖားfတဲ့တုံး(ငျ)ရှိ တနျြဇနျ့z
☞ တကယျလား။ Facebook ပျေါမှာ မငျးတငျတဲ့ post တှကေို သူ Like ပေးတာ ငါ အမွဲတှပေ့ါတယျ။
☞ ရှဈhတဲ့ ဝေါယဲကထေား တနျြဇနျ့z ပူကော့ ကြီhရှဈh တနျြဇနျ့z ဆုံး(ငျ)လိုငျမေးယို ကြဲငျးhကြဲငျ့h(ငျ) လြောငျကော့ထနျြး
☞ ဟုတျတယျ၊ ငါလညျး သူ့ကို Like ပေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ Like ပေးရုံသကျသကျပဲ၊ စကားတောငျ ကောငျးကောငျးမပွောဖူးပါဘူး။
☞ ဟောငျပါ့ ဝေါယီဝေ နီမဲငျးရှဈh ဟောငျဖဲငျး(ငျ)ယို နဲ
☞ ကောငျးပါပွီ၊ မငျးတို့ကို သူငယျခငျြးတှလေို့ ငါထငျမိတာပါ။
☞ ရှောh ရှီhဟှာ့ Facebook ရှနျ့h(ငျ) ဟောငျတောဖဲငျး(ငျ)ယိုတိုး ကြီhရှဈh ဟုရှမျး(ငျ)တနျြဇနျ့z ပူစှမျ့ ကြဲငျးhတဲ့ ဟောငျဖဲငျး(ငျ)ယို ဝျေါမဲငျကြောကျ ကြဲ့hယနျ့(ငျ)တဲ့ ဖဲငျး(ငျ)ယို "တနျြဇနျ့zကြီးhကြောငျး"
☞ ပွောရရငျတော့၊ Facebook ပျေါက သူငယျခငျြးအားလုံးက Like တှပေဲ အပွနျအလှနျ ပေးနကွေတာ၊ သူငယျခငျြးအစဈလို့တော့ ပွောလို့မရပါဘူး။ ဒီလို သူငယျခငျြးမြိုးကို ငါတို့က "Like ပေးတဲ့ သူငယျခငျြး 点赞之交 " လို့ ချေါတယျလေ။
☞ ဟားဟား ကြဲ့hကဲာ့ဆေ ယိုယိစီး ဝျေါတဲ့ Facebook ရှနျ့h(ငျ) ယဲယို ယိရှဲ "တနျြဇနျ့zကြီးhကြောငျး"
☞ ဟားဟား၊ ဒီစကားလုံးက အဓိပ်ပာယျ ရှိတယျ။ ငါ့ Facebook ထဲမှာလညျး "Like ပေးတဲ့ သူငယျခငျြး 点赞之交 " တခြို့ ရှိပါတယျ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၆၅ ။
9:02 PM C-Sentence , Chinese
လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ တရုတ်ဝါကျတိုလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျက်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် စကားပြောဆိုရာမှာ သင့်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Bǎoyòu wǒ ba!
Zhù fú nǐ!
Bù néng bàoyuàn!
Dāngrán bú shì!
Gāi sǐ de shǎguā!
Wán de kāixīn!
ဝါကတြို စုစညျးမှု - ၆၅ ။
လှယျကူရိုးရှငျးတဲ့ တရုတျဝါကတြိုလေးတှကေို တငျပေးလိုကျပါတယျ။ ကကျြမှတျထားခွငျးဖွငျ့ စကားပွောဆိုရာမှာ သငျ့အတှကျ အထောကျအကူ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
8:52 PM C-Text , Chinese
တရုတ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ သင် ထမင်းစားဖူးပါသလား။ တကယ်လို့ သူတို့နဲ့အတူ ထမင်းစားမယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကို သတိပြုဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ တရုတ်မိတ်ဆွေက သင့်ကို ထမင်းစားဖိတ်မယ်ဆိုရင်၊ သင် ဘာတွေကို သတိပြုရမလဲ။
အရင်ဆုံး၊ လက်ဆောင်လေး နည်းနည်းတော့ သင် ပြင်ဆင်ထားရမယ်၊ ဥပမာ သစ်သီး ဒါမှမဟုတ် မုန့် စသည်ဖြင့်ပေါ့။
တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းအိမ်သွားပြီး ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်၊ သင်က ပန်းတစ်စည်း ပို့ပေးလို့ရပါတယ်။
နံပါတ် ၂ ကတော့ ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာ ဟင်းတစ်မျိုးတည်းကိုချည်းပဲ မစားပါနဲ့၊ တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ဟင်းအများကြီးကို မိမိရဲ့ ပန်းကန်ထဲ မထည့်ပါနဲ့။
တကယ်လို့ သင်က အများကြီး စားလိုက်မယ်ဆိုရင်၊ တခြားသူတွေက ဒီဟင်းကို စားလို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
နံပါတ် ၃ ကတော့ တကယ်လို့ သင်စားချင်တဲ့ ဟင်းက သင်နဲ့ အရမ်းဝေးနေမယ်ဆိုရင်၊ တခြားသူကို အကူအညီတောင်းပြီး ဟင်းထည့်ခိုင်းပါ၊ မိမိဘာသာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဟင်းမထည့်ပါနဲ့။
4. 吃饭〔chī fàn〕ထမင်းစားသည်
7. 准备〔zhǔnbèi〕 ပြင်ဆင်သည်
12. 点心〔diǎnxīn〕မုန့်။ ဒင်ဆမ်း
14. 一束花〔yíshù huā〕ပန်း တစ်စည်း
15. 第二〔dì ér〕ဒုတိယ
16. 一直〔yìzhí〕 တောက်လျှောက်
19. 第三〔dì sān〕တတိယ
20. 离〔lí〕... မှ။ က
21. 远〔yuǎn〕 ဝေးကွာသော
တရုတျမိတျဆှတှေနေဲ့အတူ သငျ ထမငျးစားဖူးပါသလား။ တကယျလို့ သူတို့နဲ့အတူ ထမငျးစားမယျဆိုရငျ ဒါလေးတှကေို သတိပွုဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ တရုတျမိတျဆှကေ သငျ့ကို ထမငျးစားဖိတျမယျဆိုရငျ၊ သငျ ဘာတှကေို သတိပွုရမလဲ။
အရငျဆုံး၊ လကျဆောငျလေး နညျးနညျးတော့ သငျ ပွငျဆငျထားရမယျ၊ ဥပမာ သဈသီး ဒါမှမဟုတျ မုနျ့ စသညျဖွငျ့ပေါ့။
တကယျလို့ သူငယျခငျြးအိမျသှားပွီး ထမငျးစားမယျဆိုရငျ၊ သငျက ပနျးတဈစညျး ပို့ပေးလို့ရပါတယျ။
နံပါတျ ၂ ကတော့ ထမငျးစားတဲ့အခြိနျမှာ ဟငျးတဈမြိုးတညျးကိုခညျြးပဲ မစားပါနဲ့၊ တဈကွိမျတညျးမှာ ဟငျးအမြားကွီးကို မိမိရဲ့ ပနျးကနျထဲ မထညျ့ပါနဲ့။
တကယျလို့ သငျက အမြားကွီး စားလိုကျမယျဆိုရငျ၊ တခွားသူတှကေ ဒီဟငျးကို စားလို့ရမှာ မဟုတျတော့ဘူး။
နံပါတျ ၃ ကတော့ တကယျလို့ သငျစားခငျြတဲ့ ဟငျးက သငျနဲ့ အရမျးဝေးနမေယျဆိုရငျ၊ တခွားသူကို အကူအညီတောငျးပွီး ဟငျးထညျ့ခိုငျးပါ၊ မိမိဘာသာ မတျတပျရပျပွီး ဟငျးမထညျ့ပါနဲ့။
4. 吃饭〔chī fàn〕ထမငျးစားသညျ
7. 准备〔zhǔnbèi〕 ပွငျဆငျသညျ
12. 点心〔diǎnxīn〕မုနျ့။ ဒငျဆမျး
14. 一束花〔yíshù huā〕ပနျး တဈစညျး
16. 一直〔yìzhí〕 တောကျလြှောကျ
20. 离〔lí〕... မှ။ က
21. 远〔yuǎn〕 ဝေးကှာသော
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(206) 知
8:30 PM C-Draw , Chinese
ဒီတရုတ်စာလုံးလေးကတော့ မသိမဖြစ် ကျက်မှတ်ထားရမယ့် စာလုံးလေးပေါ့နော်။ “သိသည်” ဆိုတာကို တရုတ်လို 知 လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(205) 声
8:26 PM C-Draw , Chinese
声 ဆိုတာကတော့ မြန်မာလို “အသံ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီနေ့ လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ စာလုံးလေးပါ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(204) 工
8:23 PM C-Draw , Chinese
“အလုပ်၊ လုပ်ငန်း” ကို တရုတ်လို 工 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီစာလုံးလေးကလည်း အသုံးများသလို ရေးရလည်း လွယ်ကူပါတယ်နော်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(203) 午
8:19 PM C-Draw , Chinese
午 ဆိုတာက အချိန်ပြသင်္ကေတကို ဖော်ပြရာမှာ သုံးတဲ့ တရုတ်စာလုံးတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးရလွယ်ကူသလို အသုံးလည်းများတာမို့ လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(202) 干
8:14 PM C-Draw , Chinese
ဒီနေ့ လေ့ကျင့်ကြမယ့် တရုတ်စာလုံးလေးကတော့ 干 ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးရလွယ်ကူပါတယ်။ မြန်မာလိုကတော့ “ပြုလုပ်သည်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(201) 血
8:11 PM C-Draw , Chinese
သင် သွေးလှူဖူးပါသလား။ သင့်ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားက ဘာလဲ။ “သွေး” ကိုတော့ တရုတ်လို 血 လို့ ခေါ်ပါတယ်နော်။
4:44 AM C-Knowledge , Chinese
လူသားတို့ရဲ့ အသိဥာဏ်ဟာ တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ တစ်ဆင့်ပြိီး တစ်ဆင့် မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ အစကဦးက လူသားတွေဟာ အဝတ်အစား ဝတ်ရကောင်းမှန်း မသိကြပါဘူး။ နောက်တော့ ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင် တိရိစ္ဆာန်တွေကို သတ်ပြီး ရလာတဲ့ သားရေ တောကောင်တွေရဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပတ်ပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကြံကြံခံကြရပါတယ်။ နောက်တော့ အသိဥာဏ်တွေ မြင့်လာတဲ့အခါမှာ အရှက်လုံစေဖို့ တီထွင်လာကြပါတယ်။ နောက်တော့ ဒီဇိုင်းတွေ ဖက်ရှင်ကျဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ မြင့်တက်လာခဲ့ အခါကျတော့ ကျောက်ခေတ်ကိုတောင် ပြန်သွားနေသလိုပါပဲ။
Credit - 天下第一 #SwamHtet
နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူ့ရိုးရာနဲ့ သူ့ဓလေ့ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်။ ရိုးရာဓလေ့ဆိုတာနဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံ ဆင်ယင်မှုတွေ သမိုင်းကြောင်းတွေက ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံများ ပြောင်းလဲလာပုံ သမိုင်းကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည် နှစ် ၅၀၀၀ သမိုင်း မစတင်မှီမှာ လူသားတို့ဟာ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့အတိုင်း ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်အောင် ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပေမယ့် နိုင်ငံထူထောင်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ် ရှိလာချိန်မှာတော့ သူ့ဒေသအလိုက် ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေဟာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ နှစ် ၅၀၀၀ သမိုင်း စတင်တဲ့ 三皇五帝 ခေတ်ကာလ 黄帝 ဟွမ်သိဘုရင် အုပ်စိုးတယ်လို့ ပြောတဲ့ခေတ်အထိ တရုတ်ပြည်မှာ အဝတ်အစားရယ်လို့ သီးသန့် မတီထွင်နိုင်သေးပါဘူး။ အဲ့အချိန်က အသိဥာဏ်အားဖြင့်တော့ အရှက်တရားကို သိလာချိန်ဖြစ်လို့ အဝတ်အစားကို တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ သားရေတွေနဲ့သာ ချူ ပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး ရောင်စုံကျောက်တွေ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အရိုး သွား အစွယ် စတာတွေနဲ့ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု စတင်ခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တမ်း အဝတ်အစားကို စတင် ယက်လုပ်နိုင်တဲ့ ခေတ်ကတော့ ရှမင်းဆက် ခေတ်လို့ သိရပေမယ့် ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုကိုကတော့ အဆင့်အတန်းအားဖြင့် မမြင့်လှသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 商 Shāng စန်းမင်းဆက် (ဘီစီ ၁၇ ရာစုမှ ဘီစီ ၁၁ ရာစု) ကစပြီး ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ဟာ ယနေ့ခေတ် တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံသမိုင်းကို စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စန်းမင်းဆက်ခေတ်မှာတော့ တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံကို စတင် တီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဝတ်စုံရဲ့ ပုံစံကတော့ ယနေ့ခေတ် ဘလောက်စ်အကျီင်္ိ ပုံစံကို အပွနဲ့ အောက်ပိုင်းက စကပ်ပုံစံကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ခေတ်က သာမန်အားဖြင့် မိန်းမဝတ်စုံနဲ့ ယောကျာ်းဝတ်စုံဟာ ကွာခြားမှု သိပ်မရှိပါဘူး။ စစ်ထွက်ဝတ်စုံသာ ကွာခြားမှု ရှိတာပါ။ စန်းခေတ်ပြီးတော့ ကျိူးခေတ်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ နှစ်တစ်ထောင်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဒီဇိုင်းက ပြောင်းလဲလာပါတယ်။
ကျိူးခေတ်ရောက်တော့ အခုခေတ် သိုင်းဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဝတ်ထားသလိုပေါ့ စန်းခေတ်လို မဟုတ်တော့ပဲ တဆက်တည်း ဝတ်စုံရှည်ကြီးတွေကို ဝတ်ဆင်လာကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်တဲ့ မော်စီတုန်းဝတ်ဆင်တဲ့ ပုံစံ အင်္ကျီ မောင်းဝတ်စုံ Mao Suit ဟာ ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ အမှန်က ဆွန်ယက်ဆင်လက်ထက်မှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ တရုတ်အမျိူးသားဝတ်စုံ 中山裝 ကျူံးစန်းကျွမ်းကို အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ရုံပါပဲ။ အမျိူးသမီးတွေဆို 长衫ချန်စန်း သို့မဟုတ် 旗袍 ချီဖောင် ဒီဇိုင်းတွေဟာ ခေတ်စားလာပါတယ်။ မြန်မာကလူအများစုကတော့ ပိုင်ဝှေ့အင်္ကျီလို့ သိကြပါတယ်။ တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲ ရုပ်သံလိုင်းတွေမှာ စပြတော့ မင်းသမီး ပိုင်ဝှေ့ ဝတ်ဆင်ခဲ့လို့ အလွယ်တကူပဲ ပိုင်ဝှေ့အင်္ကျီလို့ ခေါ်ခဲ့ကြတာ သတိရနေသေးပါတယ်။ တိန့်ရှောင်ဖိန် လက်ထက်ရောက်လာတော့ တံခါးဖွင့်စီးပွားရေးနဲ့ တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ တရုတ်ရိုးရာဒီဇိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်းပုံစံကို ပေါင်းစပ်ပြီး ချူ ပ်လုပ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
အကျီင်္ိအရောင်နဲ့ သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက်က အယူအဆများ
များသောအားဖြင့် တရုတ်တွေမှာ အနက်မဝတ်ရဖူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တချိူ့ မျိူးနွယ်တွေကျတော့ အဖြူ ပေါ့။ ရှားပါတယ် ဒါကတော့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမင်္ဂလာ အရောင်မို့တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်လေ တရုတ် အသုဘ အခမ်းအနားတွေမှာ သုံးတဲ့အရောင်ဆို အယူအရ မင်္ဂလာမရှိဖူးလို့ ယူဆကြတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အပါအဝင် တရုတ်ခေတ်လူငယ်တွေဟာ ဒီအယူတွေကို သိပ်အလေးမထားတော့ပါဘူး။ ငယ်တုန်းကတော့ ကြောက်လို့သာ မဝတ်ရဲတာ။ အခုကျတော့ ဘီဒိုတစ်ခုလုံး အနက်ရောင်ချည်းပဲ။ အဲ့တော့ အနက်ရောင်မဝတ်ရဖူးလို့ တားမြစ်လာရင် ပြန်ပြီးတော့ ချေပနိုင်လို့ ဒါလေးကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။
တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံသမိုင်းမှာ အရောင်သတ်မှတ်ချက်က ခေတ်အလိုက် တူညီမှုလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အစသမိုင်းဖြစ်တဲ့ ရှခေတ်မှာ အနက်ရောင်ဟာ မင်္ဂလာအရောင် ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးတွေသာ ဝတ်ဆင်ရတဲ့ အရောင်ပါ။ စန်းခေတ်ကျတော့ အဖြူ ရောင်ကို မင်္ဂလာအရောင်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျိူးခေတ်ကျတော့ အနီရောင်ဟာ မင်္ဂလာအရောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်မင်္ဂလာအခမ်းအနား အများစုကတော့ အနီရောင်ကိုသာ ယနေ့အထိ အသုံးပြုလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ အနီရောင် အနက်ရောင်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့အချိန်ကစပြီး အနီရောင်ဟာ တရုတ်ရိုးရာမှာ မင်္ဂလာအရောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ရှေးခေတ် မင်းဆက်တွေမှာတော့ ရာထူးအဆင့်အတန်းကို ခွဲခြားတဲ့ နေရာမှာ အရောင်တွေကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ထန်ခေတ်ကစလို့ တော်ဝင်အရောင်ဟာ ရွှေဝါရောင် အဝါရောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘုရင်နဲ့ မင်းမျိူးနွယ်ကလွဲရင် ဘယ်သူမှ အသုံးပြုခွင့် မရှိပါဘူး။ သုံးခဲ့ရင်တော့ သေဒဏ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘုရင်ဝတ်စုံဟာ နဂါးပတ်ဝတ်ရုံတော်ဖြစ်ပြီး အရောင်က ရွှေဝါရောင်ဖြစ်ကာ မင်းမြှောက်တန်ဆာထဲ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘုရင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ သုံးခွင့်မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့များ သုံးစွဲခဲ့ရင် ချူ ပ်လုပ်ပေးသူကော သုံးစွဲသူပါ မင်းပြစ်မင်းဒဏ် ထိုက်သင့်ပါတယ်။ ချင်းခေတ်မှာတော့ အရောင်စပ်နည်းတွေဟာ တိုးတက်လာတဲ့အညီ ခရမ်းရောင်ဟာ အဆင့် ၅ နဲ့ အထက်ရှိတဲ့ မှူးမတ်တွေသာ အသုံးပြုခွင့်ရတဲ့ အရောင်ဖြစ်လာပါတယ်။
အဓိက အင်္ကျီဒီဇိုင်း ၄ မျိူး
တရုတ်ပြည်ရဲ့ ရှည်လျားလှတဲ့ နှစ် ၅၀၀၀ သမိုင်းထဲမှာ အင်္ကျီဒီဇိုင်းတွေဟာ အမျိူးမျိူး ပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် ဘယ်ဒီဇိုင်းမဆို အခုဖော်ပြပေးမယ့် ဒီဇိုင်း ၄ မျိူး အပေါ်မှာပဲ မူတည်ခဲ့တာပါ။ ယနေ့ခေတ်အထိ လူကြိုက်များနေဆဲ ဒီဇိုင်း ၄ မျိူးကို ဆက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
汉服 ဟန့်ဖု ကတော့ ဟန်ဝတ်စုံဆိုတဲ့အတိုင်း ဟန် မျိူးနွယ်တွေရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်ခဲ့ပြီး ဟန့်ခေတ်ကစလို့ ခေတ်အဆက်ဆက် ဟန်လူမျိူးတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး အင်ပါယာဖြစ်တဲ့ မင်မင်းဆက်ခေတ်အထိ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချူးတွေ ပြည်မကို သိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာ ဟန်လူမျိူးတွေကို စိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိူးတဲ့ အနေနဲ့ ဟန်လူမျိူးတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေကို ဖြောက်ဖျက်ကာ မန်ချူးဇာတ်ထဲ အတင်းပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့ကို ထိပ်ပြောင် နောက်ဆံပင်ရှည် ထားခိုင်းတာမျိူး မထားရင် သူပုန်လို့ စွပ်ဆွဲခြင်း စသည်ဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့ရာမှာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုပါ ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်ပိုင်း တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံတွေမှာ မန်ချူးတို့ရဲ့ ဓလေ့အငွေ့အသက်တွေ ကျန်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ဖုဝတ်ဆင်ပုံကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဝတ်စုံရှည်ကို အတွင်းခံ အင်္ကျီ ဘောင်းဘီ ဝတ်ဆင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို တပတ် ပတ်ကာ ကြိုးခါးပတ်ဖြင့် ချီရပါတယ်။ ဟန်ဖုဟာ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေ မပါဝင်ပဲ ရိုးရှင်းတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပြီး ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာ တခြားဝတ်စုံတွေနဲ့ မတူနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်မျိူးကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
唐装 ထန်ကျွမ်းကတော့ မန်ချူးအင်္ကျီပုံစံကိုမှ တရုတ်ရိုးရာပုံစံနဲ့ အနောက်တိုင်း ချူ ပ်လုပ်နည်းတိုင်း ချူ ပ်လုပ်ထားတဲ့ တရုတ်ရိုးရာ ပွဲတက်ဝတ်စုံ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဥပမာ ဘားရက်အိုဘားမား ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အင်္ကျီပုံစံပေါ့ဗျာ အဲ့လိုနိုင်ငံတကာက ခေါင်းဆောင်တွေကို အမှတ်တရနေနဲ့ ပေးအပ်ပြီး ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ အခမ်းအနားဝတ်စုံ တစ်ခုပါ။ ကော်လံ လည်ဂတုံးကိုမှ အင်္ကျီကြယ်သီးမှာ တရုတ်ရိုးရာ အကြွေစေ့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အကျီင်္ိရဲ့ အပေါ်မှာ အဝိုင်းလေးတွေနဲ့ ဒီဇိုင်းဖော်ထားပြီး 福 ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ 寿 အသက်ရှည်ခြင်း စာလုံးပါတဲ့ အဝိုင်းကွက်ဒီဇိုင်းဟာ ကံကောင်းပြီး ဆန္ဒတွေ ပြီးပြည့်စုံပါစေဆိုတဲ့ ဆုတောင်းပေးတဲ့ အဓိပ္ပါလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
长衫ချန်စန်း သို့မဟုတ် 旗袍 ချီဖောင်ကတော့ တရုတ်မိန်းကလေးတွေ ဝတ်ဆင်တဲ့ အင်္ကျီဒီဇိုင်းပါ။ အခုကျတော့ အနောက်တိုင်းနဲ့လဲ ရောလာတော့ ဒီဇိုင်းအကြောင်း သိပ်မပြောတော့ပါဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ ဒူးအောက်ပိုင်းကနေမှ အနည်းငယ် ခွဲချူ ပ်တဲ့ ပုံစံကနေ အမျိူးစုံ ချူ ပ်ဝတ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အစကတော့ ဒူးအောက်ပိုင်းကနေ ၂ ဖက်ခွဲပုံစံကနေ အခုအခါမှာတော့ တဖက်ခွဲတွေကော ၂ ဖက်ခွဲ ပေါင်းရင်းကနေပါ ခွဲချူ ပ်တာတွေ စသည့်ဖြင့် ခေတ်ကာလရေစီးအတိုင်း ချူ ပ်လုပ်လာကြပါတယ်။ ကနဦးကတည်းက အခုထိ မပြောင်းတာကတော့ အဝတ် ယက်လုပ်တဲ့အခါမှာ ချည်ထည် သို့မဟုတ် ပိုးထည်အသုံးပြုခြင်းပါပဲ။
中山裝 ကျူံးစန်းကျွမ်းကို ဆွန်ယက်ဆင်ဝတ်စုံလို့ အစက ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၁၁ ခုနစ် မန်ချင်းအစိုးရကို တော်လှန်တော့ ဝတ်စားဆင်ယင် အစပိုင်းက ပြောခဲ့တဲ့ ဆံပင်ပုံစံကိုလည်း မိမိနှစ်သက်ရာ ထားပိုင်ခွင့်တွေ စသည်ဖြင့် အားလုံးကို တော်လှန်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်အမျိူးသား ဝတ်စုံကို တီထွင်ဖို့ ဆွန်ယက်ဆင်ဟာ စဉ်းစားခဲ့ပြီးနောက် 中山裝 ကျူံးစန်းကျွမ်းကို အနောက်တိုင်းပုံစံဝတ်စုံနဲ့ တရုတ်ဒီဇိုင်း ပေါင်းစပ်တဲ့ အင်္ကျီအဖြစ် ချူ ပ်လုပ်ကာ ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ကော်လာ လည်ဂတုံးနဲ့ အိတ်ကပ် ၄ ခု ပါဝင်တဲ့ အင်္ကျီဒီဇိုင်းဟာ တရုတ်အမျိူးသား ယဉ်ကျေးမှု လက္ခဏာတရပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် မော်စီတုန်း ပြည်မမှာ အာဏာရလာပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ 毛泽东 မောင်းကျဲ့သုန်း (မော်စီတုန်း) ကို အစွဲပြုပြီး မောင်းဝတ်စုံလို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနစ်လောက်အထိ တရုတ်ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ ကျူံးစန်းကျွမ်း သို့မဟုတ် မောင်း ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီး ဒီဘက်ခေတ် ရှီကျင့်ပင် ဝမ်ကြားပေါင်တို့ ခေတ်ရောက်တော့ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကိုသာ အဓိကထား ဝတ်ဆင်လာကြပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ဟာ နယ်မြေကျယ်ဝန်းသလို မျိူးနွယ်စု တိုင်းရင်းသားတွေဟာလည်း မျိူးစုံ ရှိတာမို့ တခြားဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေလဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
ရှေးခေတ်တရုတ်ပြည်၏ နန်းတွင်းဝတ်စုံ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
龙袍 လုံဖောင် ဝတ်စုံကတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘုရင်တွေသာ ဝတ်ဆင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဝတ်စုံပါ။ ရွှေဝါရောင်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
အရာရှိအဆင့်အတန်းကိုတော့ အရာရှိ ဝတ်ဆင်ရတဲ့ ဝတ်စုံအရောင် ဝတ်စုံမှာပါတဲ့ တံဆိပ် ခေါင်းပေါင်း စတာတွေနဲ့ ခွဲခြားလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ မင်ခေတ်မှာဆိုရင် ပထမအဆင့်အရာရှိရဲ့ ဝတ်စုံမှာ ပါတဲ့ တံဆိပ်က ကြိုးကြာငှက်ပုံ ဒုတိယအဆင့်က ရွှေရောင်ရစ်ငှက်ပုံ တတိယအဆင့်က ဒေါင်းပုံ စတုတ္ထအဆင့်က ဘဲငန်းပုံ ပဉ္စမအဆင့် ငွေရောင်ရစ်ငှက်ပုံ ဆဋ္ဌမအဆင့် ဗျိူင်းငှက်ပုံ သတ္တမအဆင့် ပန်းရောင် ရေဘဲပုံ အဌမအဆင့် Oriole ငှက်တဲ့ နာမည်မပြောတတ်ဖူး နဝမအဆင့် ငုံးငှက်ပုံ တို့ဖြင့် ရာထူးအဆင့်အတန်းကို ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်ရိုးရာမင်္ဂလာဆောင် ဝတ်စုံကတော့ ရှေးတုန်းက အဆင့်အတန်းအလိုက် ဆင်ယင်ခွင့်သာ ရှိပေမယ့် အခုကျတော့ အင်္ကျီဒီဇိုင်းတွေမှာ နဂါးဝတ်စုံ ဇာမဏီငှက်ဝတ်စုံ စသည်ဖြင့် သုံးစွဲလာခဲ့ပါပြီ။
လူသားတို့ရဲ့ အသိဉာဏျဟာ တိုးတကျလာတာနဲ့ အမြှ တီထှငျဖနျတီးမှုတှေ တဈဆငျ့ပွီး တဈဆငျ့ မွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။ အစကဦးက လူသားတှဟော အဝတျအစား ဝတျရကောငျးမှနျး မသိကွပါဘူး။ နောကျတော့ ရာသီဥတုဒဏျကို ခံနိုငျအောငျ တိရိစ်ဆာနျတှကေို သတျပွီး ရလာတဲ့ သားရေ တောကောငျတှရေဲ့ အမှေးအမြှငျတှကေို ခန်ဓာကိုယျမှာ ပတျပွီး ရာသီဥတုဒဏျကို ကွံကွံခံကွရပါတယျ။ နောကျတော့ အသိဉာဏျတှေ မွငျ့လာတဲ့အခါမှာ အရှကျလုံစဖေို့ တီထှငျလာကွပါတယျ။ နောကျတော့ ဒီဇိုငျးတှေ ဖကျရှငျကဖြို့ဆိုတဲ့ အခကျြတှနေဲ့ တဖွညျးဖွညျး တီထှငျဖနျတီးမှုတှေ မွငျ့တကျလာခဲ့ အခါကတြော့ ကြောကျခတျေကိုတောငျ ပွနျသှားနသေလိုပါပဲ။
နိုငျငံတိုငျး နိုငျငံတိုငျးမှာ သူ့ရိုးရာနဲ့ သူ့ဓလဆေို့တာ ရှိကွပါတယျ။ ရိုးရာဓလဆေို့တာနဲ့ ရိုးရာဝတျစုံ ဆငျယငျမှုတှေ သမိုငျးကွောငျးတှကေ ထိပျဆုံးမှာ ရှိနပေါတယျ။ အခုဖျောပွပေးမှာကတော့ တရုတျရိုးရာဝတျစုံမြား ပွောငျးလဲလာပုံ သမိုငျးကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
တရုတျပွညျ နှဈ ၅၀၀၀ သမိုငျး မစတငျမှီမှာ လူသားတို့ဟာ အပျေါမှာ ပွောခဲ့အတိုငျး ရာသီဥတုဒဏျ ခံနိုငျအောငျ ဝတျဆငျခဲ့ကွပမေယျ့ နိုငျငံထူထောငျနိုငျတဲ့ အသိဉာဏျ ရှိလာခြိနျမှာတော့ သူ့ဒသေအလိုကျ ဆငျယငျထုံးဖှဲ့မှုတှဟော ပျေါထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ နှဈ ၅၀၀၀ သမိုငျး စတငျတဲ့ 三皇五帝 ခတျေကာလ 黄帝 ဟှမျသိဘုရငျ အုပျစိုးတယျလို့ ပွောတဲ့ခတျေအထိ တရုတျပွညျမှာ အဝတျအစားရယျလို့ သီးသနျ့ မတီထှငျနိုငျသေးပါဘူး။ အဲ့အခြိနျက အသိဉာဏျအားဖွငျ့တော့ အရှကျတရားကို သိလာခြိနျဖွဈလို့ အဝတျအစားကို တိရိစ်ဆာနျတှရေဲ့ သားရတှေနေဲ့သာ ခြူ ပျလုပျခဲ့ကွပွီး ရောငျစုံကြောကျတှေ တိရိစ်ဆာနျတှရေဲ့ အရိုး သှား အစှယျ စတာတှနေဲ့ ဆငျယငျထုံးဖှဲ့မှု စတငျခဲ့ပါပွီ။ တကယျတမျး အဝတျအစားကို စတငျ ယကျလုပျနိုငျတဲ့ ခတျေကတော့ ရှမငျးဆကျ ခတျေလို့ သိရပမေယျ့ ဆငျယငျထုံးဖှဲ့မှုကိုကတော့ အဆငျ့အတနျးအားဖွငျ့ မမွငျ့လှသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ 商 Shāng စနျးမငျးဆကျ (ဘီစီ ၁၇ ရာစုမှ ဘီစီ ၁၁ ရာစု) ကစပွီး ဆငျယငျထုံးဖှဲ့ဟာ ယနခေ့တျေ တရုတျရိုးရာဝတျစုံသမိုငျးကို စတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ စနျးမငျးဆကျခတျေမှာတော့ တရုတျရိုးရာဝတျစုံကို စတငျ တီထှငျနိုငျခဲ့ပွီး ဝတျစုံရဲ့ ပုံစံကတော့ ယနခေ့တျေ ဘလောကျဈအကြီင်္ိ ပုံစံကို အပှနဲ့ အောကျပိုငျးက စကပျပုံစံကို ဝတျဆငျခဲ့ကွပါတယျ။ အဲ့ခတျေက သာမနျအားဖွငျ့ မိနျးမဝတျစုံနဲ့ ယောကျြားဝတျစုံဟာ ကှာခွားမှု သိပျမရှိပါဘူး။ စဈထှကျဝတျစုံသာ ကှာခွားမှု ရှိတာပါ။ စနျးခတျေပွီးတော့ ကြိူးခတျေကို ရောကျတဲ့အခါမှာတော့ နှဈတဈထောငျကွာတဲ့ အခြိနျမှာ ဝတျစားဆငျယငျမှုဒီဇိုငျးက ပွောငျးလဲလာပါတယျ။
ကြိူးခတျေရောကျတော့ အခုခတျေ သိုငျးဇာတျကားတှထေဲမှာ ဝတျထားသလိုပေါ့ စနျးခတျေလို မဟုတျတော့ပဲ တဆကျတညျး ဝတျစုံရှညျကွီးတှကေို ဝတျဆငျလာကွပါတယျ။ ယနခေ့တျေမှာတော့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ တညျထောငျတဲ့ မျောစီတုနျးဝတျဆငျတဲ့ ပုံစံ အကငြ်္ီ မောငျးဝတျစုံ Mao Suit ဟာ ခတျေစားလာခဲ့ပါတယျ။ အမှနျက ဆှနျယကျဆငျလကျထကျမှာ ခတျေစားခဲ့တဲ့ တရုတျအမြိူးသားဝတျစုံ 中山裝 ကြူံးစနျးကြှမျးကို အမညျပွောငျးလဲခဲ့ရုံပါပဲ။ အမြိူးသမီးတှဆေို 长衫ခနျြစနျး သို့မဟုတျ 旗袍 ခြီဖောငျ ဒီဇိုငျးတှဟော ခတျေစားလာပါတယျ။ မွနျမာကလူအမြားစုကတော့ ပိုငျဝှအေ့ကငြ်္ီလို့ သိကွပါတယျ။ တရုတျဇာတျလမျးတှဲ ရုပျသံလိုငျးတှမှော စပွတော့ မငျးသမီး ပိုငျဝှေ့ ဝတျဆငျခဲ့လို့ အလှယျတကူပဲ ပိုငျဝှအေ့ကငြ်္ီလို့ ချေါခဲ့ကွတာ သတိရနသေေးပါတယျ။ တိနျ့ရှောငျဖိနျ လကျထကျရောကျလာတော့ တံခါးဖှငျ့စီးပှားရေးနဲ့ တိုးတကျလာတဲ့အခါမှာ တရုတျရိုးရာဒီဇိုငျးနဲ့ အနောကျတိုငျးပုံစံကို ပေါငျးစပျပွီး ခြူ ပျလုပျလာတာ တှရေ့ပါတယျ။
အကြီင်္ိအရောငျနဲ့ သမိုငျးခတျေအဆကျဆကျက အယူအဆမြား
မြားသောအားဖွငျ့ တရုတျတှမှော အနကျမဝတျရဖူးလို့ ကြှနျတျောတို့ ငယျငယျတုနျးက တားမွဈခဲ့ပါတယျ။ တခြိူ့ မြိူးနှယျတှကေတြော့ အဖွူ ပေါ့။ ရှားပါတယျ ဒါကတော့။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အမင်ျဂလာ အရောငျမို့တဲ့။ ဟုတျပါတယျလေ တရုတျ အသုဘ အခမျးအနားတှမှော သုံးတဲ့အရောငျဆို အယူအရ မင်ျဂလာမရှိဖူးလို့ ယူဆကွတာကိုး။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော အပါအဝငျ တရုတျခတျေလူငယျတှဟော ဒီအယူတှကေို သိပျအလေးမထားတော့ပါဘူး။ ငယျတုနျးကတော့ ကွောကျလို့သာ မဝတျရဲတာ။ အခုကတြော့ ဘီဒိုတဈခုလုံး အနကျရောငျခညျြးပဲ။ အဲ့တော့ အနကျရောငျမဝတျရဖူးလို့ တားမွဈလာရငျ ပွနျပွီးတော့ ခပြေနိုငျလို့ ဒါလေးကို ဖတျကွညျ့ပေးပါ။
တရုတျရိုးရာဝတျစုံသမိုငျးမှာ အရောငျသတျမှတျခကျြက ခတျေအလိုကျ တူညီမှုလညျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ အစသမိုငျးဖွဈတဲ့ ရှခတျေမှာ အနကျရောငျဟာ မင်ျဂလာအရောငျ ဂုဏျသရရှေိ လူကွီးတှသော ဝတျဆငျရတဲ့ အရောငျပါ။ စနျးခတျေကတြော့ အဖွူ ရောငျကို မင်ျဂလာအရောငျလို့ သတျမှတျခဲ့ပွီး ကြိူးခတျေကတြော့ အနီရောငျဟာ မင်ျဂလာအရောငျ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ တရုတျမင်ျဂလာအခမျးအနား အမြားစုကတော့ အနီရောငျကိုသာ ယနအေ့ထိ အသုံးပွုလေ့ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလဲ အနီရောငျ အနကျရောငျကို အရမျးကွိုကျတယျပေါ့နျော။ အဲ့အခြိနျကစပွီး အနီရောငျဟာ တရုတျရိုးရာမှာ မင်ျဂလာအရောငျ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ တရုတျရှေးခတျေ မငျးဆကျတှမှောတော့ ရာထူးအဆငျ့အတနျးကို ခှဲခွားတဲ့ နရောမှာ အရောငျတှကေို အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။ ထနျခတျေကစလို့ တျောဝငျအရောငျဟာ ရှဝေါရောငျ အဝါရောငျ ဖွဈခဲ့ပွီး ဘုရငျနဲ့ မငျးမြိူးနှယျကလှဲရငျ ဘယျသူမှ အသုံးပွုခှငျ့ မရှိပါဘူး။ သုံးခဲ့ရငျတော့ သဒေဏျပဲ ဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုက ဘုရငျဝတျစုံဟာ နဂါးပတျဝတျရုံတျောဖွဈပွီး အရောငျက ရှဝေါရောငျဖွဈကာ မငျးမွှောကျတနျဆာထဲ ပါဝငျနတောကွောငျ့ ဘုရငျကလှဲပွီး ဘယျသူမှ သုံးခှငျ့မရှိပါဘူး။ တကယျလို့မြား သုံးစှဲခဲ့ရငျ ခြူ ပျလုပျပေးသူကော သုံးစှဲသူပါ မငျးပွဈမငျးဒဏျ ထိုကျသငျ့ပါတယျ။ ခငျြးခတျေမှာတော့ အရောငျစပျနညျးတှဟော တိုးတကျလာတဲ့အညီ ခရမျးရောငျဟာ အဆငျ့ ၅ နဲ့ အထကျရှိတဲ့ မှူးမတျတှသော အသုံးပွုခှငျ့ရတဲ့ အရောငျဖွဈလာပါတယျ။
အဓိက အကငြ်္ီဒီဇိုငျး ၄ မြိူး
တရုတျပွညျရဲ့ ရှညျလြားလှတဲ့ နှဈ ၅၀၀၀ သမိုငျးထဲမှာ အကငြ်္ီဒီဇိုငျးတှဟော အမြိူးမြိူး ပွောငျးလဲခဲ့ပမေယျ့ ဘယျဒီဇိုငျးမဆို အခုဖျောပွပေးမယျ့ ဒီဇိုငျး ၄ မြိူး အပျေါမှာပဲ မူတညျခဲ့တာပါ။ ယနခေ့တျေအထိ လူကွိုကျမြားနဆေဲ ဒီဇိုငျး ၄ မြိူးကို ဆကျကွညျ့ရအောငျဗြာ။
汉服 ဟနျ့ဖု ကတော့ ဟနျဝတျစုံဆိုတဲ့အတိုငျး ဟနျ မြိူးနှယျတှရေဲ့ ရိုးရာဝတျစုံဖွဈခဲ့ပွီး ဟနျ့ခတျေကစလို့ ခတျေအဆကျဆကျ ဟနျလူမြိူးတို့ရဲ့ နောကျဆုံး အငျပါယာဖွဈတဲ့ မငျမငျးဆကျခတျေအထိ ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ဝတျစုံလဲ ဖွဈပါတယျ။ မနျခြူးတှေ ပွညျမကို သိမျးပိုကျတဲ့အခါမှာ ဟနျလူမြိူးတှကေို စိတျဓာတျကျိုရိုကျခြိူးတဲ့ အနနေဲ့ ဟနျလူမြိူးတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလတှေ့ကေို ဖွောကျဖကျြကာ မနျခြူးဇာတျထဲ အတငျးပွောငျးလဲစခေဲ့ပါတယျ။ ရှကေို့ ထိပျပွောငျ နောကျဆံပငျရှညျ ထားခိုငျးတာမြိူး မထားရငျ သူပုနျလို့ စှပျဆှဲခွငျး စသညျဖွငျ့ ပွောငျးလဲခဲ့ရာမှာ ဝတျစားဆငျယငျမှုကိုပါ ပွောငျးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နောကျပိုငျး တရုတျရိုးရာဝတျစုံတှမှော မနျခြူးတို့ရဲ့ ဓလအေ့ငှအေ့သကျတှေ ကနျြရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဟနျဖုဝတျဆငျပုံကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။ ပုံမှာ ပွထားတဲ့အတိုငျး ဝတျစုံရှညျကို အတှငျးခံ အကငြ်္ီ ဘောငျးဘီ ဝတျဆငျပွီး ခန်ဓာကိုယျကို တပတျ ပတျကာ ကွိုးခါးပတျဖွငျ့ ခြီရပါတယျ။ ဟနျဖုဟာ အကငြ်္ီကွယျသီးတှေ မပါဝငျပဲ ရိုးရှငျးတဲ့ ပုံစံဖွဈပွီး ဝတျဆငျတဲ့အခါမှာ တခွားဝတျစုံတှနေဲ့ မတူနဲ့ ထူးခွားတဲ့ ခံစားခကျြမြိူးကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
唐装 ထနျကြှမျးကတော့ မနျခြူးအကငြ်္ီပုံစံကိုမှ တရုတျရိုးရာပုံစံနဲ့ အနောကျတိုငျး ခြူ ပျလုပျနညျးတိုငျး ခြူ ပျလုပျထားတဲ့ တရုတျရိုးရာ ပှဲတကျဝတျစုံ ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ တရုတျနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံတကာ ဆှေးနှေးပှဲတှမှော ဥပမာ ဘားရကျအိုဘားမား ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ အကငြ်္ီပုံစံပေါ့ဗြာ အဲ့လိုနိုငျငံတကာက ခေါငျးဆောငျတှကေို အမှတျတရနနေဲ့ ပေးအပျပွီး ဝတျဆငျလရှေိ့တဲ့ အခမျးအနားဝတျစုံ တဈခုပါ။ ကျောလံ လညျဂတုံးကိုမှ အကငြ်္ီကွယျသီးမှာ တရုတျရိုးရာ အကွှစေဖွေ့ငျ့ ပွုလုပျထားပါတယျ။ အကြီင်္ိရဲ့ အပျေါမှာ အဝိုငျးလေးတှနေဲ့ ဒီဇိုငျးဖျောထားပွီး 福 ပြျောရှငျမှုနဲ့ 寿 အသကျရှညျခွငျး စာလုံးပါတဲ့ အဝိုငျးကှကျဒီဇိုငျးဟာ ကံကောငျးပွီး ဆန်ဒတှေ ပွီးပွညျ့စုံပါစဆေိုတဲ့ ဆုတောငျးပေးတဲ့ အဓိပ်ပါလညျး ဖွဈပါတယျ။
长衫ခနျြစနျး သို့မဟုတျ 旗袍 ခြီဖောငျကတော့ တရုတျမိနျးကလေးတှေ ဝတျဆငျတဲ့ အကငြ်္ီဒီဇိုငျးပါ။ အခုကတြော့ အနောကျတိုငျးနဲ့လဲ ရောလာတော့ ဒီဇိုငျးအကွောငျး သိပျမပွောတော့ပါဘူး။ အရငျတုနျးကတော့ ဒူးအောကျပိုငျးကနမှေ အနညျးငယျ ခှဲခြူ ပျတဲ့ ပုံစံကနေ အမြိူးစုံ ခြူ ပျဝတျလာတာ တှရေ့ပါတယျ။ အစကတော့ ဒူးအောကျပိုငျးကနေ ၂ ဖကျခှဲပုံစံကနေ အခုအခါမှာတော့ တဖကျခှဲတှကေော ၂ ဖကျခှဲ ပေါငျးရငျးကနပေါ ခှဲခြူ ပျတာတှေ စသညျ့ဖွငျ့ ခတျေကာလရစေီးအတိုငျး ခြူ ပျလုပျလာကွပါတယျ။ ကနဦးကတညျးက အခုထိ မပွောငျးတာကတော့ အဝတျ ယကျလုပျတဲ့အခါမှာ ခညျြထညျ သို့မဟုတျ ပိုးထညျအသုံးပွုခွငျးပါပဲ။
中山裝 ကြူံးစနျးကြှမျးကို ဆှနျယကျဆငျဝတျစုံလို့ အစက ချေါခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၉၁၁ ခုနဈ မနျခငျြးအစိုးရကို တျောလှနျတော့ ဝတျစားဆငျယငျ အစပိုငျးက ပွောခဲ့တဲ့ ဆံပငျပုံစံကိုလညျး မိမိနှဈသကျရာ ထားပိုငျခှငျ့တှေ စသညျဖွငျ့ အားလုံးကို တျောလှနျခဲ့ပါတယျ။ တရုတျအမြိူးသား ဝတျစုံကို တီထှငျဖို့ ဆှနျယကျဆငျဟာ စဉျးစားခဲ့ပွီးနောကျ 中山裝 ကြူံးစနျးကြှမျးကို အနောကျတိုငျးပုံစံဝတျစုံနဲ့ တရုတျဒီဇိုငျး ပေါငျးစပျတဲ့ အကငြ်္ီအဖွဈ ခြူ ပျလုပျကာ ဝတျဆငျခဲ့ပါတယျ။ ကျောလာ လညျဂတုံးနဲ့ အိတျကပျ ၄ ခု ပါဝငျတဲ့ အကငြ်္ီဒီဇိုငျးဟာ တရုတျအမြိူးသား ယဉျကြေးမှု လက်ခဏာတရပျ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျ မျောစီတုနျး ပွညျမမှာ အာဏာရလာပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ 毛泽东 မောငျးကြဲ့သုနျး (မျောစီတုနျး) ကို အစှဲပွုပွီး မောငျးဝတျစုံလို့ ချေါဝျေါခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၉၈၀ ခုနဈလောကျအထိ တရုတျခေါငျးဆောငျတိုငျးဟာ ကြူံးစနျးကြှမျး သို့မဟုတျ မောငျး ဝတျစုံကို ဝတျဆငျခဲ့ကွပွီး ဒီဘကျခတျေ ရှီကငျြ့ပငျ ဝမျကွားပေါငျတို့ ခတျေရောကျတော့ အနောကျတိုငျးဝတျစုံကိုသာ အဓိကထား ဝတျဆငျလာကွပါတယျ။
တရုတျပွညျဟာ နယျမွကေယျြဝနျးသလို မြိူးနှယျစု တိုငျးရငျးသားတှဟောလညျး မြိူးစုံ ရှိတာမို့ တခွားဝတျစားဆငျယငျမှုတှလေဲ ရှိနပေါသေးတယျ။
ရှေးခတျေတရုတျပွညျ၏ နနျးတှငျးဝတျစုံ အဆငျ့သတျမှတျခကျြမြား
龙袍 လုံဖောငျ ဝတျစုံကတော့ အပျေါမှာ ပွောခဲ့တဲ့အတိုငျး ဘုရငျတှသော ဝတျဆငျခှငျ့ရှိတဲ့ ဝတျစုံပါ။ ရှဝေါရောငျကို အသုံးပွုထားပါတယျ။
အရာရှိအဆငျ့အတနျးကိုတော့ အရာရှိ ဝတျဆငျရတဲ့ ဝတျစုံအရောငျ ဝတျစုံမှာပါတဲ့ တံဆိပျ ခေါငျးပေါငျး စတာတှနေဲ့ ခှဲခွားလို့ရပါတယျ။ ဥပမာ မငျခတျေမှာဆိုရငျ ပထမအဆငျ့အရာရှိရဲ့ ဝတျစုံမှာ ပါတဲ့ တံဆိပျက ကွိုးကွာငှကျပုံ ဒုတိယအဆငျ့က ရှရေောငျရဈငှကျပုံ တတိယအဆငျ့က ဒေါငျးပုံ စတုတ်ထအဆငျ့က ဘဲငနျးပုံ ပဉ်စမအဆငျ့ ငှရေောငျရဈငှကျပုံ ဆဋ်ဌမအဆငျ့ ဗြိူငျးငှကျပုံ သတ်တမအဆငျ့ ပနျးရောငျ ရဘေဲပုံ အဌမအဆငျ့ Oriole ငှကျတဲ့ နာမညျမပွောတတျဖူး နဝမအဆငျ့ ငုံးငှကျပုံ တို့ဖွငျ့ ရာထူးအဆငျ့အတနျးကို ခှဲခွားနိုငျပါတယျ။
တရုတျရိုးရာမင်ျဂလာဆောငျ ဝတျစုံကတော့ ရှေးတုနျးက အဆငျ့အတနျးအလိုကျ ဆငျယငျခှငျ့သာ ရှိပမေယျ့ အခုကတြော့ အကငြ်္ီဒီဇိုငျးတှမှော နဂါးဝတျစုံ ဇာမဏီငှကျဝတျစုံ စသညျဖွငျ့ သုံးစှဲလာခဲ့ပါပွီ။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ပီကင်းဘဲကင်။
4:03 AM C-Knowledge , Chinese
ပီကင်းဘဲကင်ဆိုတဲ့ တရုတ်ဟင်းလျာဟာ တရုတ်ပြည်တင်မကပဲ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာပါ နာမည်ကြီးတဲ့ ဟင်းလျာတပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီကင်းဘဲကင်စာသုံးဖို့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ မြို့တော် ပေကျင်းမြို့ကို တကူးတက လာရောက်စာသုံးတဲ့အထိ နာမည်ကြီးတဲ့ ဒီဟင်းလျာဟာ ဘာတွေများ စားကောင်းသလဲဆိုတာကို သရေကျအောင် တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ Admin ကိုယ်တိုင်လဲ မစားဖူးသေးဘူး။ သက်လား ရွှေဘဲမှာတောင် သွားမစားနိုင်ဖူး။
Credit - 天下第一
ပီကင်းဘဲကင်ဟာ မြင်တာနဲ့ စားချင်လောက်အောင် စွဲဆောင်နေပါတယ်။ ကြွပ်ယွတဲ့ အရေခွံ နူးညံတဲ့ ဘဲသားလွှာတွေရယ် အရေခွံနဲ့ အသား တလွှာသပ်သပ်စီ ဖြစ်နေပြီး ပေကျင်းမြို့ရဲ့ စားဝိုင်းတိုင်းမှာ မပါမဖြစ်ပါပဲ။ ဘဲကင်ဖို့အတွက် ဘဲကောင်ကို သားပေါက်သည်ကနေ ၆၅ ရက်သား အရွယ်ဆို ဘဲသားကင်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပြီးတာနဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ ခတ်ပြီးတာနဲ့ ဘဲကင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီပေါ့။ စားသုံးတဲ့အခါမှာလဲ တရုတ်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကြက်သွန်မိတ်လေး ဖုချိူက်လေးတွေ ဖြူးသခွားသီး ခရမ်းချဉ်သီးအကွင်းလေး ပတ်လည်ဝိုင်းပြီး ပဲရည်ဆော့လေးနဲ့ တို့စားပေါ့ကွယ်။ ဘဲကင်ကို တရုတ်ပြည်မှာတော့ နံပြားလို ဂျူံပြားနဲ့ လိပ်ပြီး အချဉ်ရည်နဲ့ စားသုံးတာလဲ ရှိပါတယ်။ နာမည်တော့ မခေါ်တတ်ဖူး။ ဘဲကင်ရဲ့ အရသာတော့ ဘယ်လိုနေလဲ ဆိုတာတော့ မသိပါဘူးဗျာ။ ဘုံကျောင်း ကန်တော့ပွဲစွန့်တုန်းက စားရတဲ့ ဘဲကင်နဲ့ အတူတူပဲ နေမှာပါပဲလေ။ Made By Chinese ပဲဟာကိုနော့်။
ပီကင်းဘဲကင်ဟာ သူ့သမိုင်းနဲ့ သူရှိခဲ့တဲ့ ဟင်းလျာတပွဲပါ။ ပီကင်းဘဲကင် ဟင်းလျာဟာ တောင်ပိုင်း မြောက်ပိုင်း မင်းဆက်ကတည်းက ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ဟင်းလျာလို့ မှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။ မွန်ဂိုတွေအုပ်စိုးတဲ့ ယွမ်မင်းဆက် ခေတ်မှာတော့ တော်ဝင်ဟင်းပွဲစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟင်းလျာအမျိူးအစား တစ်ခုလာခဲ့ပါပြီ။ ၁၃၃၀ ခုနစ် နန်းတွင်းစားဖိုချောင်ရဲ့ 飲膳正要 လို့ခေါ်တဲ့ ဟင်းလျာမှတ်တမ်းထဲမှာတော့ 燒鴨子 Shaoyazi ဘဲကင်ဟင်းလျာလို့ မူလက ခေါ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မှတ်မိသေးလား မသိဖူး။ ကောကျင့်တို့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ကျိူးပေါ်ထုံးနဲ့ ဟုန်ချီကုန်းတို့ နန်းတွင်းထဲဝင်ပြီး ရတနာ ၇ မျိူးဘဲသားဟင်းလျာကို ဝင်ခိုးစားတယ်ဆိုတာလေ။ နောက်ပိုင်း မင်မင်းဆက်ခေတ်ကို ရောက်လာချိန်မှာတော့ ပီကင်းဘဲကင်ဟာ တော်ဝင်ဟင်းလျာထဲမှာ မပါမဖြစ် အဓိက ဟင်းလျာပွဲတော်အုပ်တစ်ခု အနေနဲ့ ပါဝင်လာပါတယ်။ ပီကင်းဘဲကင်ကို အဓိကထားပြီး ရောင်းချတဲ့ ဆိုင်ကတော့ 便宜坊 ဖြန်ယိဖန်းဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြန်ယိဖန်းကို ပေကျင်းမှာ ၁၄၁၆ ခုနစ်ကတည်းက စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်ဟာ ယနေ့တိုင် မူလအရသာ မပျက်ပဲ ရောင်းချပေးနေတဲ့ ပီကင်းဘဲကင်တွေ ဆိုင်တွေထဲက နာမည်ကြီး တဆိုင်လဲ ဖြစ်တာကြောင့် ပေကျင်းရောက်ခဲ့ရင် သွားဆွဲလိုက်ကြအုံးဗျိူ့။
ချမ့်လုံဧကရာဇ်လက်ထက် ချင်းမင်းဆက် ခေတ်မှာတော့ နိုင်ငံတဝန်း ပျံနှံ့သွားပြီး လူကြိုက်အများဆုံး ဟင်းလျာဖြစ်လာပါတယ်။ ဖြန်ယိဖန်းလိုပဲ နောက်ထပ် နာမည်ကြီးတဲ့ ပီကင်းဘဲကင်ဆိုင်ကတော့ 全聚德 ချွမ်ကျွီသယ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချွမ်ကျွီသယ်ကို ၁၈၆၄ ခုနစ်မှာ ရန်ချွမ်ရန်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ စားသောက်ဆိုဟာလဲ အခုထိတိုင်အောင် ရှိနေတဲ့ ရှေးဟောင်းစားသောက်ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင် ၂ ဆိုင်လုံးဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် စားသောက်ဆိုင် ၂ ခုဖြစ်ပြီး ဖြန်ယိဖန်းစားသောက်ဆိုင်ဟာဆိုရင် ပေကျင်းမြို့ရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀ ရာစုအစမှာတော့ ပီကင်းဘဲကင်ဟာ ကမ္ဘာတဝန်းကို နာမည်ကြီးဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ သမိုင်းဝင် အမေရိကန် သံအမတ် ကစ်ဆင်ဂျာနဲ့ ချူ အင်းလိုင် (တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချူ ပ်) တို့ ၁၉၇၁ ဂျူ လိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၌ လျှိူ့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က မနက်ခင်းပိုင်း ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ နေ့လည်ပိုင်းရောက်တော့ ပီကင်းဘဲကင်နဲ့ နေ့လယ်စာကို ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါတယ်။ အဲ့ဒါမှာ ကစ်ဆင်ဂျာရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာဟာ ပီကင်းဘဲကင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ၁၉၇၂ ခုနစ် အမေရိကန်သမ္မတ ရစ်ချက်နစ်ဆင်ကို တရုတ်ပြည်ကို လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တုန်းကလဲ ပီကင်းဘဲကင်နဲ့ပဲ ကျွေးမွေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ၁၉၇၅ ခုနစ် ချူ အင်းလိုင် သေဆုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကစ်ဆင်ဂျာဟာ နောက်တကြိမ် ပီကင်းဘဲကင်ကို စားသုံးဖို့ တရုတ်ပြည်ကို သက်သက်ကို လာလည်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ချွမ်ကျွီသယ် စားသောက်ဆိုင်က ပီကင်းဘဲကင်အရသာကတော့ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ဖီဒယ်ကတ်စရို အကြိုက်ဆုံးပါပဲတဲ့။
ပီကင်ဘဲကင်ကို မြန်မာမှာ ကင်ရင်တော့ လွယ်မယ်မထင်ပါဘူး။ အကြောင်းက ပီကင်ဘဲကင် ကင်ဖို့အတွက် ဘဲအမျိူးအစားနဲ့လဲ ဆိုင်ပါသေးတယ်။ ပီကင်းဘဲကင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပီကင်းဘဲ အကောင်တွေကိုတော့ နန်ကျင်း ပေကျင်းတို့မှာ ခြံများဖြင့် မွေးမြူ ထားကြပါတယ်။ ၄၅ ရက်လောက် ခြံထဲမှာ လွတ်လပ်စွာနေခွင့်ပေးပြီး ချက်ပြုတ်ချိန် ရောက်ဖို့ ရက် ၂၀ လောက် အလိုမှာတော့ တရက်ကို ၄ ကြိမ်ခန့် အစာကို အတင်းကျွေးရပါတယ်။ (ဘဲကောင်လေးက ချစ်စရာလေး။ ကိုယ်တွေဆို သတ်မစားရက်ပါဘူး။ အဲ တစ်ပန်းကန်လုံး ပြောင်တော့မှ ဘဲလေးသနားပါတယ်တော့ မလုပ်နဲ့နော်။ ) အဲ့လို အစာကို မချက်ပြုတ်ခင် အတင်းထိုးသိပ်ကျွေးလို့ ပီကင်းဘဲကင်ကို အမည်ပြောင်အနေနဲ့ 北京填鸭 အစာသွပ်ထည့်ထားတဲ့ ဘဲကင်လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။
ပေကျင်းမြို့ရဲ့ နာမည်ကြီး ပီကင်းဘဲကင် စားသောက်ဆိုင်တွေကတော့ Quanjude (全聚德), Bianyi Fang (便宜坊), Changan Yihao (長安一號), Beijing Xiaowangfu (北京小王府) နဲ့ Dadong Kaoyadian (大董烤鴨店) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချွမ်ကျွီသယ်နဲ့ ဖြန်ယိဖန်းတို့ကတော့ ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက တည်ရှိလာတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေဖြစ်တာကြောင့် လူကြိုက်ပိုများပါတယ်။ အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံး စားသောက်ဆိုင် ၂ ဆိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ချွမ်ကျွီသယ်ဟာဆိုရင် ၁၉၉၉ ခုနစ်မှာ ပေကျင်းမြို့ရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ပီကငျးဘဲကငျဆိုတဲ့ တရုတျဟငျးလြာဟာ တရုတျပွညျတငျမကပဲ ကမ်ဘာတဈဝနျးမှာပါ နာမညျကွီးတဲ့ ဟငျးလြာတပှဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပီကငျးဘဲကငျစာသုံးဖို့ တရုတျပွညျရဲ့ မွို့တျော ပကေငျြးမွို့ကို တကူးတက လာရောကျစာသုံးတဲ့အထိ နာမညျကွီးတဲ့ ဒီဟငျးလြာဟာ ဘာတှမြေား စားကောငျးသလဲဆိုတာကို သရကေအြောငျ တငျဆကျလိုကျရပါတယျ။
မှတျခကျြ။ ။ Admin ကိုယျတိုငျလဲ မစားဖူးသေးဘူး။ သကျလား ရှဘေဲမှာတောငျ သှားမစားနိုငျဖူး။
ပီကငျးဘဲကငျဟာ မွငျတာနဲ့ စားခငျြလောကျအောငျ စှဲဆောငျနပေါတယျ။ ကွှပျယှတဲ့ အရခှေံ နူးညံတဲ့ ဘဲသားလှာတှရေယျ အရခှေံနဲ့ အသား တလှာသပျသပျစီ ဖွဈနပွေီး ပကေငျြးမွို့ရဲ့ စားဝိုငျးတိုငျးမှာ မပါမဖွဈပါပဲ။ ဘဲကငျဖို့အတှကျ ဘဲကောငျကို သားပေါကျသညျကနေ ၆၅ ရကျသား အရှယျဆို ဘဲသားကငျဖို့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ပွီးတာနဲ့ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျတှေ ခတျပွီးတာနဲ့ ဘဲကငျဖို့ အသငျ့ဖွဈပွီပေါ့။ စားသုံးတဲ့အခါမှာလဲ တရုတျတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ကွကျသှနျမိတျလေး ဖုခြိူကျလေးတှေ ဖွူးသခှားသီး ခရမျးခဉျြသီးအကှငျးလေး ပတျလညျဝိုငျးပွီး ပဲရညျဆော့လေးနဲ့ တို့စားပေါ့ကှယျ။ ဘဲကငျကို တရုတျပွညျမှာတော့ နံပွားလို ဂြူံပွားနဲ့ လိပျပွီး အခဉျြရညျနဲ့ စားသုံးတာလဲ ရှိပါတယျ။ နာမညျတော့ မချေါတတျဖူး။ ဘဲကငျရဲ့ အရသာတော့ ဘယျလိုနလေဲ ဆိုတာတော့ မသိပါဘူးဗြာ။ ဘုံကြောငျး ကနျတော့ပှဲစှနျ့တုနျးက စားရတဲ့ ဘဲကငျနဲ့ အတူတူပဲ နမှောပါပဲလေ။ Made By Chinese ပဲဟာကိုနေျာ့။
ပီကငျးဘဲကငျဟာ သူ့သမိုငျးနဲ့ သူရှိခဲ့တဲ့ ဟငျးလြာတပှဲပါ။ ပီကငျးဘဲကငျ ဟငျးလြာဟာ တောငျပိုငျး မွောကျပိုငျး မငျးဆကျကတညျးက ပျေါပေါကျနတေဲ့ ဟငျးလြာလို့ မှတျတမျးအရ သိရပါတယျ။ မှနျဂိုတှအေုပျစိုးတဲ့ ယှမျမငျးဆကျ ခတျေမှာတော့ တျောဝငျဟငျးပှဲစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ဟငျးလြာအမြိူးအစား တဈခုလာခဲ့ပါပွီ။ ၁၃၃၀ ခုနဈ နနျးတှငျးစားဖိုခြောငျရဲ့ 飲膳正要 လို့ချေါတဲ့ ဟငျးလြာမှတျတမျးထဲမှာတော့ 燒鴨子 Shaoyazi ဘဲကငျဟငျးလြာလို့ မူလက ချေါဆိုတာကို တှရေ့ပါတယျ။ မှတျမိသေးလား မသိဖူး။ ကောကငျြ့တို့ ဇာတျကားထဲမှာ ကြိူးပျေါထုံးနဲ့ ဟုနျခြီကုနျးတို့ နနျးတှငျးထဲဝငျပွီး ရတနာ ၇ မြိူးဘဲသားဟငျးလြာကို ဝငျခိုးစားတယျဆိုတာလေ။ နောကျပိုငျး မငျမငျးဆကျခတျေကို ရောကျလာခြိနျမှာတော့ ပီကငျးဘဲကငျဟာ တျောဝငျဟငျးလြာထဲမှာ မပါမဖွဈ အဓိက ဟငျးလြာပှဲတျောအုပျတဈခု အနနေဲ့ ပါဝငျလာပါတယျ။ ပီကငျးဘဲကငျကို အဓိကထားပွီး ရောငျးခတြဲ့ ဆိုငျကတော့ 便宜坊 ဖွနျယိဖနျးဆိုတဲ့ စားသောကျဆိုငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖွနျယိဖနျးကို ပကေငျြးမှာ ၁၄၁၆ ခုနဈကတညျးက စတငျ တညျထောငျခဲ့ပွီး အဆိုပါ စားသောကျဆိုငျဟာ ယနတေို့ငျ မူလအရသာ မပကျြပဲ ရောငျးခပြေးနတေဲ့ ပီကငျးဘဲကငျတှေ ဆိုငျတှထေဲက နာမညျကွီး တဆိုငျလဲ ဖွဈတာကွောငျ့ ပကေငျြးရောကျခဲ့ရငျ သှားဆှဲလိုကျကွအုံးဗြိူ့။
ခမျြ့လုံဧကရာဇျလကျထကျ ခငျြးမငျးဆကျ ခတျေမှာတော့ နိုငျငံတဝနျး ပြံနှံ့သှားပွီး လူကွိုကျအမြားဆုံး ဟငျးလြာဖွဈလာပါတယျ။ ဖွနျယိဖနျးလိုပဲ နောကျထပျ နာမညျကွီးတဲ့ ပီကငျးဘဲကငျဆိုငျကတော့ 全聚德 ခြှမျကြှီသယျ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခြှမျကြှီသယျကို ၁၈၆၄ ခုနဈမှာ ရနျခြှမျရနျက တညျထောငျခဲ့ပွီး အဆိုပါ စားသောကျဆိုဟာလဲ အခုထိတိုငျအောငျ ရှိနတေဲ့ ရှေးဟောငျးစားသောကျဆိုငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ စားသောကျဆိုငျ ၂ ဆိုငျလုံးဟာ တရုတျပွညျရဲ့ ရှေးဟောငျးသမိုငျးဝငျ စားသောကျဆိုငျ ၂ ခုဖွဈပွီး ဖွနျယိဖနျးစားသောကျဆိုငျဟာဆိုရငျ ပကေငျြးမွို့ရဲ့ အမှတျအသားတဈခုလို့ ဆိုရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၂၀ ရာစုအစမှာတော့ ပီကငျးဘဲကငျဟာ ကမ်ဘာတဝနျးကို နာမညျကွီးဖို့ အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကတော့ သမိုငျးဝငျ အမရေိကနျ သံအမတျ ကဈဆငျဂြာနဲ့ ခြူ အငျးလိုငျ (တရုတျနိုငျငံ ဝနျကွီးခြူ ပျ) တို့ ၁၉၇၁ ဂြူ လိုငျလ ၁၀ ရကျနေ့၌ လြှိူ့ဝှကျတှဆေုံ့ခဲ့စဉျက မနကျခငျးပိုငျး ဆှေးနှေးပှဲအပွီးမှာ နလေ့ညျပိုငျးရောကျတော့ ပီကငျးဘဲကငျနဲ့ နလေ့ယျစာကို ကြှေးမှေးဧညျ့ခံပါတယျ။ အဲ့ဒါမှာ ကဈဆငျဂြာရဲ့ အကွိုကျဆုံးဟငျးလြာဟာ ပီကငျးဘဲကငျ ဖွဈခဲ့ပါတယျတဲ့။ ၁၉၇၂ ခုနဈ အမရေိကနျသမ်မတ ရဈခကျြနဈဆငျကို တရုတျပွညျကို လာလညျဖို့ ဖိတျချေါတုနျးကလဲ ပီကငျးဘဲကငျနဲ့ပဲ ကြှေးမှေးခဲ့ပွနျပါတယျ။ ၁၉၇၅ ခုနဈ ခြူ အငျးလိုငျ သဆေုံးပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ကဈဆငျဂြာဟာ နောကျတကွိမျ ပီကငျးဘဲကငျကို စားသုံးဖို့ တရုတျပွညျကို သကျသကျကို လာလညျခဲ့ပါသေးတယျ။ ခြှမျကြှီသယျ စားသောကျဆိုငျက ပီကငျးဘဲကငျအရသာကတော့ ကြူးဘားတျောလှနျရေးခေါငျးဆောငျ ဖီဒယျကတျစရို အကွိုကျဆုံးပါပဲတဲ့။
ပီကငျဘဲကငျကို မွနျမာမှာ ကငျရငျတော့ လှယျမယျမထငျပါဘူး။ အကွောငျးက ပီကငျဘဲကငျ ကငျဖို့အတှကျ ဘဲအမြိူးအစားနဲ့လဲ ဆိုငျပါသေးတယျ။ ပီကငျးဘဲကငျအတှကျ လိုအပျတဲ့ ပီကငျးဘဲ အကောငျတှကေိုတော့ နနျကငျြး ပကေငျြးတို့မှာ ခွံမြားဖွငျ့ မှေးမွူ ထားကွပါတယျ။ ၄၅ ရကျလောကျ ခွံထဲမှာ လှတျလပျစှာနခှေငျ့ပေးပွီး ခကျြပွုတျခြိနျ ရောကျဖို့ ရကျ ၂၀ လောကျ အလိုမှာတော့ တရကျကို ၄ ကွိမျခနျ့ အစာကို အတငျးကြှေးရပါတယျ။ (ဘဲကောငျလေးက ခဈြစရာလေး။ ကိုယျတှဆေို သတျမစားရကျပါဘူး။ အဲ တဈပနျးကနျလုံး ပွောငျတော့မှ ဘဲလေးသနားပါတယျတော့ မလုပျနဲ့နျော။ ) အဲ့လို အစာကို မခကျြပွုတျခငျ အတငျးထိုးသိပျကြှေးလို့ ပီကငျးဘဲကငျကို အမညျပွောငျအနနေဲ့ 北京填鸭 အစာသှပျထညျ့ထားတဲ့ ဘဲကငျလို့လဲ ချေါပါတယျ။
ပကေငျြးမွို့ရဲ့ နာမညျကွီး ပီကငျးဘဲကငျ စားသောကျဆိုငျတှကေတော့ Quanjude (全聚德), Bianyi Fang (便宜坊), Changan Yihao (長安一號), Beijing Xiaowangfu (北京小王府) နဲ့ Dadong Kaoyadian (大董烤鴨店) တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခြှမျကြှီသယျနဲ့ ဖွနျယိဖနျးတို့ကတော့ ရှေးနှဈပေါငျး မြားစှာကတညျးက တညျရှိလာတဲ့ စားသောကျဆိုငျတှဖွေဈတာကွောငျ့ လူကွိုကျပိုမြားပါတယျ။ အရညျအသှေး အမွငျ့ဆုံး စားသောကျဆိုငျ ၂ ဆိုငျအဖွဈ သတျမှတျခဲ့ပွီး ခြှမျကြှီသယျဟာဆိုရငျ ၁၉၉၉ ခုနဈမှာ ပကေငျြးမွို့ရဲ့ အမှတျအသားတဈခုအဖွဈ သတျမှတျခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
Stephen Chow (King Of Comedy ဖြစ်လာတဲ့အာရှသား)။
3:37 AM C-Knowledge , Chinese
Stephen Chow ( King Of Comedy
ဖြစ်လာတဲ့အာရှသား (သို့ ) ဟောင်ကောင်ပျံကျ
Credit - ထက်ဝန
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့။
တွေကိုအလူးအလဲခံနေရတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Chi
က အမကြီးအမိရာပီသပါပေတယ်။ ဈေးထဲမိန်း
ဝင်လုပ်တယ်။ အမလတ်ဖြစ်သူက လက်သည်း
ညှပ်လိုက်ရောင်းတယ်။ အငယ်ဆုံး ညီမနဲ့မောင်
ဟာစကားနည်းခြင်း တခုခုဆိုငိုတတ်ခြင်း ကနွဲ့က
တွေကျောင်းလာပြီတို့ အခြောက် စသဖြင့်အစခံရ
ရင် ဘာမှပြန်မတုန့်ပြန်တတ်ခဲ့ဘူး။ အမဖြစ်သူ
ဘူး။ ဘရုစ်လီ ------ TV အိမ်ကိုစရောက်ပြီးမ
က ဘရုစ်လီပါပဲ။ ဘရုစ်လီကားတွေကိုအမြဲကြည့်
စပြီး " အမေ သားသူ့လိုမင်းသားဖြစ်ချင်တယ် "
" စိတ်ကူးယဉ် မူတိုင်းဟာ
တယ်။ ၇နှစ်သားဘဝမှာ လက်ညည်းညှပ်အိတ်
တယ်။ ဒါကိုသိတဲ့မောင်ဖြစ်သူက အမဖြစ်သူအ
ဖြစ်သူကသိ ရိုက်ကြရန်ဖြစ်ကြနဲ့ ထိုကလေးရဲ့ငယ်
သိုင်းကျင့်ခဲ့တယ်။ တဖက်မှာလဲ စားပွဲထိုးအပြင်
နောက်ပိုင်း အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာ အကောင်း
ဆုံးဟာသသရုပ်ဆောင် Asia Pacific Film
Festival ရဲ့ အကောင်းဆုံးမင်းသား အဖြစ်သတ်
" မှတ်ဥာဏ်ဆိုတာ နာကျင်မူရဲ့
တောက်တိုမယ်ရ ပစ္စည်းထမ်းပစ္စည်းမ တခုခုဝယ်
စိတ်မပျက်ခဲ့ဘူး ဘာကြောင့်လဲဆို ဒီရုံးကဝတ္ထု
နေ Chow ဟာဝတ္ထုတွေရဲ့သဘောတရား ချိတ်
သိလာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ထိုအလုပ်ကထွက်
ပိုင်းတွေကို TVB ဆိုတဲ့ရုပ်သံလိုင်းတခုကဖွင့်တဲ့
လူတချို့အတွက် အဖော်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ "
ဇွဲမလျော့လို့ TVB ကနေဘယ်တော့မှဖောင်
လက်မခံဖို့အထိ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Chow ဟာဒီ
ကိုသိသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဇွဲမလျော့ဘူး TVB
တယ်။ မင်းသားခိုင်းတာအစ စက်အဖွဲ့ကအထမ်း
တယ်။ ဒီအချိန်မှာသူသွားတွေ့တာက လီချီဟောင်
လာခဲ့တယ်။ လီချီဟောင်က ဒီလူငယ်ဟာရုပ်ရှင်
ခဲ့ပြီး TVB ကနေညပိုင်းသင်တဲ့သက်ကြီးပိုင်း
TVB ကိုပြောပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်သူ့အ
TVB ရဲ့ဇာတ်လမ်းတခုဖြစ်တဲ့ Demi-Gods
and Semi-Devils ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာစ
တင်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေပေးရတဲ့
လူတွေအခန်းနဲ့ ဖြတ်လျှောက်၃ ၄ခန်းပါပဲ။စကား
ပြောခန်းတခုမှမပါပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ Chowဟာ
The Old Miao Myth The Legend of the Condor
Final Justice စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာဖြတ်
လျှောက် တခန်းစနှစ်ခန်းစ လူစားထိုး နဲ့ မြို့သူ
မြို့သားနေရာတွေ တခါတလေ ရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲတဦး
မျှအဖြစ်သာပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၂ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၈၈
တောင်ဇွဲမလျှော့ခဲ့ပါဘူး။ တခါ သူပါတယ်ဆိုတဲ့
Space Shutt40 ဆိုတဲ့ ၅နှစ်ခွဲလောက်ကြာ
Chow ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကား Final Justice
မှာ ဒုတိယမင်းသားနေရာကနေ မင်းသားကြီး
ရခဲ့တဲ့ကားဖြစ်သလို 25th Golden Horse
Awards / Hong Kong Film Awards /
Best New Performer နဲ့ ဟောင်ကောင်
တယ်။ ဒါက စတီဗင်ချောင်ဆိုပြီး အာရှရုပ်ရှင်
လမ်းတွဲတွေမှာ အရံအဖြစ်ထပ်ပါခဲ့ပြီး စတီဗင်
ကို ၁၉၈၈ခုနှစ်မှာပဲ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ဒီကားက
တော့ ၁၉၈၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာရုံတင်ခဲ့တဲ့
မင်းသားကြီး ဂျက်လီရဲ့ Dragon Fight ရုပ်ရှင်
ကားကြီးပါပဲ။ ဒီကားမှာ စတီဗင်ချောင်ဟာဇာတ်
Chow ဟာ The Final Combat ကားရဲ့မင်း
သားအဖြစ် TBL ကရွေးခဲ့သလို ၁၉၈၉ခုနှစ်မှာပဲ
သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်ကီချမ်း - အက်ရှင်မင်း
ကမ္ဘာကိုထိုးဖောက်ခဲ့သူ ။ စတီဗင်ချောင် - သူ့ကို
King Of Comedy လို့ဘာကြောင့်ရုပ်ရှင်လော
ကကပေးရသလဲ . ဟုတ်ပါတယ်စတီဗင်ချောင်
ဟာ Mr.Bean လိုပဲ အာရှရုပ်ရှင်သမိုင်းရဲ့
King Of Comedy အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံလာ
ဟောင်ကောင်ရဲ့ Gordon Chanထုတ်လုပ်
ပေမယ့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၄၄သန်း နီးပါးအ
" ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချပြီး
လူမျိုးရေး အနုပညာ ဘယ်အရာမှ
ချောင်ဟာ မင်းသားတဦးအပြင် စာရေးဆရာတ
ဖူးသူပါ။ မကြာခင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ The Chow
" နင်ငါ့ကိုမချစ်လို့ နင်ပျော်မယ်ဆို
ကျင်ရမှာ နင်ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး "
( The Chow Collection)
Chow ရဲ့ကားအများစုဟာ ခွဲထွက်လာတဲ့ပုံစံ
တွေဖြစ်ခဲ့သလို Rating 6.9 နဲ့ 9ကြားအမြဲရခဲ့
၁၉၉၂ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ King Of Beggars။
တယ်။ ဒီကားမှာစာမဖတ်တတ်တဲ့ လူကြီးသား
တကားပါပဲ။ဒီကားဟာ Chow ရဲ့၁၉၉၀ခုနှစ်က
All Of The Winner ကားလိုပဲအောင်မြင်မူ
များစွာရခဲ့ပါတယ်။ Tricky Brain - ဒီကားက
$60 mil Man - ဒီကားကလဲအထူးပြောစရာ
ဆို စတီဗင်ချောင်ဟာ ရုပ်ရှင်ကား၄၀ကျော်ရိုက်
Action Drama Comedy အစုံအလင်ပါဝင်
ခြင်းပေါ့။ ပထမကားကတော့ ကျတော်တို့ငယ်ဘ
ဝ အိမ်မှာTVမဝယ်နိုင်လို့ တဆယ်ပေးပြီးကြည့်
ကား King of Comedy ပါပဲ။ ဒီကားဟာ
ခဲ့သလို ကားနာမည်King of Comedy အဖြစ်
၄၀ထိရခဲ့တဲ့ကားပါ။ဒါ့အပြင် Hong Kong
Film Awards ကြီးကိုပါရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယ
ကားကတော့ ဗီဒီယိုရုံက "မှော်ဘောလုံး"လို့ပြ
တာကိုကြည့်ခဲ့ရတဲ့ Shaolin Soccerကားပါ
ပဲ။ ဒီကားဟာ စတီဗင်ချောင်ကိုယ်တိုင် ဇာတ်
လမ်း ဒါရိုက်တာ မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကား
နိုင်မှန်းသိလို့ Chow ကကားရိုက်နားလိုက်
Rowan ဆိုတဲ့ Universe ထုတ်လုပ်ရေးက
လာခဲ့တယ်။ ထူးခြားမူကတော့ ဒီကားကြည့်ဖူးသူ
တိုင်းသိကြမယ်။ Croma နဲ့ Effect သုံးမူ
Steel String အသုံးပြုမူ ရှောင်လင်သိုင်းကို
ကားပါ။ ဒီကားရဲ့ Annimationပိုင်းကိုကိုင်ခဲ့
အဖြစ်သမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ Avatar ကားကိုတာဝန်ယူ
ခဲ့တဲ့ Dante တို့သူငယ်ချင်းတစုပါပဲ။ဒီကားဟာ
Best Seller Comedy Bookဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
" မိသားစု = ကမ္ဘာပေါ်မှာအတိုဆုံး
နဲ့ အဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံး ကဗျာတပုဒ် "
CJ7 လိုသိပ္ပံကားတောင်သူက ဒါရိုက်တာ
အာရှရဲ့ Top10အနုပညာရှင်တွေထဲ ရှာရွတ်ခန်း
ဂျက်ကီချမ်း ဂျက်လီတို့နဲ့အပြိုင် ကမ္ဘာကိုတိုးနိုင်
ခဲ့တာပေါ့။ လက်ရှိထွက်ထားတဲ့ သူဒါရိုက်တာ
လုပ်ထားတဲ့ The Mermaid ဟာလဲတရုတ်
မှာတင် အမေရိကန်ဒေါ်ဟာ ၄၀.၉သန်းရရှိပြီး
F&F7/ Star War / Jurassic World
ကိုလဲ ဝါရင့်အဘကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဂျက်ကီချမ်း
ပေါ့။ Journey To The West - အားလုံးသိ
ကြတဲ့Chow ရိုက်ကူး ဇာတ်လမ်းအဖြစ်ပါလာတဲ့
သူ ဒါရိုက်တာ ဇာတ်လမ်း ကိုစတီဗင်ချောင်ကြီး
က အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၁၅သန်းထိရယူ
ထားပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကားကြီးပေါ့။ ၂၀၁၃ခုနှစ်ရဲ့ အောင်
ရိုက်တာ ဇာတ်ညွှန်း ဇာတ်လမ်းနဲ့သာလုပ်ကိုင်
လာတဲ့ စတီဗင်ချောင်က သူ့တုန်းကကြိုးစားမူ
" ကြေကွဲလို့ ကုန်သွားတဲ့အချိန်
ပါ။ ဒါတောင်စွန့်ခွာသွားရင် ကံတရား
ဘဝင်မြင့်တာနဲ့ ကျရှုံးမှာပဲ "
Chow ဟာလက်ရှိမှာတော့ မင်းသား
အပြင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ အနုပညာ
အကြံပေး ထုတ်လုပ်သူ စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ
ဟာသသရုပ်ဆောင်နည်းပြ အပြင် တရုတ်အစိုး
ခံထားရသူပါ။ တချိန်က ဟောင်ကောင်ပျံကျဈေး
တွေရဲ့ ဒါရိုက်တာ အစိုးရရဲ့အကြံပေးဖြစ်လာခဲ့ပါ
ပြီ။ ဒါ့အပြင် Chow ဟာ Jade Lifetime
Achievement Award ဆုကြီးကိုလဲရရှိခဲ့
သလို Best Actor / Best Director /
Asia Pacific Film Best Actor /
Blue Ribbon Awards / Amsterdam
Fantastic Film Awards/ Golden
Horse Awards / Las Vegas Film
Critics Society Awardsဆုတွေကိုပါရရှိ
ထားသူပါ။ ဆုကြီးပေါင်း ၂၆ခုကိုရရှိထားပြီးကမ္ဘာ
Stephen Chow ဆိုတဲ့သူဟာ ဂျက်ကီချမ်း
ဂျက်လီ တို့ပါကျော်ပြီး တရုတ်အနုပညာရှင်တွေ
ထဲအနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံး The highest
paid star of China အဖြစ် ၂၀၁၆ သြဂုတ်
" လူတွေက မင်းကိုကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်လိမ့်
မယ်။ အထင်သေးကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မင်း
ကိုမင်းမကဲ့ရဲ့မိစေနဲ့ အထင်မသေးမိစေနဲ့ မင်းရဲ့
ဒါဆို မင်းတနေ့ အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်။ "
* ချောင်ဟာ ဆင်းရဲသားမိဘကမွေးဖွားခဲ့သူပါ။
* ချောင်ဟာ အနုပညာမျိုးရိုးမရှိပါဘူး။
* ချောင်ဟာ ၇နှစ်သားထဲကဟောင်ကောင်
* ချောင်ဟာ မိသားစုနဲ့အတူပျံကျဈေးထဲက
တောင် ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို ရွှေရည်စိမ်ဆေး
* ချောင်ဟာ အထက်တန်းပဲအောင်သူပါ။
* ချောင်ဟာ TVB ညကျောင်းကလွဲရင်ဘာ
သိုင်း ဘာအနုပညာသင်တန်း တက္ကသိုလ်မှ
* ချောင်ဟာ လက်ညည်းညှပ်ရောင်းသူ စားပွဲထိုး
အလုပ်ကြမ်းသမား ဘဝကနေ ရိုက်ကွင်းရဲ့
တောက်တိုမယ်ရလုပ်ပေးရသူ မှတဆင့် ဖြတ်
လျှောက် လူစားထိုး အရံ အဖြစ်လုပ်ခဲ့ရပြီး
* ချောင်ဟာ အက်ရှင်ဟာသလောကရဲ့ ခွဲထွက်
* ချောင်ဟာ တရုတ်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကား
* ချောင်ဟာ ဒါရိုက်တာ ဇာတ်လမ်းရေးဆရာ
သရုပ်ဆောင် နည်းပြ အနုပညာအကြံပေး
ထုတ်လုပ်သူ အပြင် အစိုးရရဲ့အကြံပေးအရာရှိ
* ချောင်ဟာသူကွယ်လွန်ခဲ့လျှင်တောင် သူ့ထုတ်
* ချောင်ဟာ အာရှရဲ့ King Of Comedy ပါ။
* ချောင်ဟာ Chow ဆိုတဲ့မစွမ်းမသန်ကလေး
* ချောင်ဟာ အာရှရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတဦး
* ချောင်ဟာ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာတော့ တရုတ်ရဲ့
[ ဆင်းရဲလို့ လူဖြစ်မရှုံးဘူး
Ref: Stephen Chow(Lydia sums upit)
The Star Of Shaolin Soccer
King Of Comedy ( Blog )
Hong Kung Movies Stars
[ Music Review ရေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်
Stephen_Chow ( King Of Comedy
ဖွဈလာတဲ့အာရှသား (သို့) ဟောငျကောငျပြံကြ
၁၉၆၂ ခုနှဈ ဇှနျလ ၂၂ရကျနေ့။
တှကေိုအလူးအလဲခံနရေတဲ့ ဇနီးဖွဈသူ Chi
က အမကွီးအမိရာပီသပါပတေယျ။ ဈေးထဲမိနျး
ဝငျလုပျတယျ။ အမလတျဖွဈသူက လကျသညျး
ညှပျလိုကျရောငျးတယျ။ အငယျဆုံး ညီမနဲ့မောငျ
ဟာစကားနညျးခွငျး တခုခုဆိုငိုတတျခွငျး ကနှဲ့က
ရငျ ဘာမှပွနျမတုနျ့ပွနျတတျခဲ့ဘူး။ အမဖွဈသူ
ဘူး။ ဘရုဈလီ ------ TV အိမျကိုစရောကျပွီးမ
က ဘရုဈလီပါပဲ။ ဘရုဈလီကားတှကေိုအမွဲကွညျ့
စပွီး " အမေ သားသူ့လိုမငျးသားဖွဈခငျြတယျ "
" စိတျကူးယဉျ မူတိုငျးဟာ
တယျ။ ၇နှဈသားဘဝမှာ လကျညညျးညှပျအိတျ
တယျ။ ဒါကိုသိတဲ့မောငျဖွဈသူက အမဖွဈသူအ
ဖွဈသူကသိ ရိုကျကွရနျဖွဈကွနဲ့ ထိုကလေးရဲ့ငယျ
သိုငျးကငျြ့ခဲ့တယျ။ တဖကျမှာလဲ စားပှဲထိုးအပွငျ
နောကျပိုငျး အကောငျးဆုံးဒါရိုကျတာ အကောငျး
ဆုံးဟာသသရုပျဆောငျ Asia Pacific Film
Festival ရဲ့ အကောငျးဆုံးမငျးသား အဖွဈသတျ
" မှတျဉာဏျဆိုတာ နာကငျြမူရဲ့
တောကျတိုမယျရ ပစ်စညျးထမျးပစ်စညျးမ တခုခုဝယျ
စိတျမပကျြခဲ့ဘူး ဘာကွောငျ့လဲဆို ဒီရုံးကဝတ်ထု
နေ Chow ဟာဝတ်ထုတှရေဲ့သဘောတရား ခြိတျ
သိလာခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ ထိုအလုပျကထှကျ
ပိုငျးတှကေို TVB ဆိုတဲ့ရုပျသံလိုငျးတခုကဖှငျ့တဲ့
လူတခြို့အတှကျ အဖျောဖွဈနလေို့ပါပဲ "
လကျမခံဖို့အထိ လုပျခဲ့ပါတယျ။ Chow ဟာဒီ
ကိုသိသှားခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ဇှဲမလြော့ဘူး TVB
တယျ။ မငျးသားခိုငျးတာအစ စကျအဖှဲ့ကအထမျး
တယျ။ ဒီအခြိနျမှာသူသှားတှတေ့ာက လီခြီဟောငျ
လာခဲ့တယျ။ လီခြီဟောငျက ဒီလူငယျဟာရုပျရှငျ
ခဲ့ပွီး TVB ကနညေပိုငျးသငျတဲ့သကျကွီးပိုငျး
TVB ကိုပွောပေးခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၈၀ ခုနှဈသူ့အ
TVB ရဲ့ဇာတျလမျးတခုဖွဈတဲ့ Demi-Gods
and Semi-Devils ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးတှဲမှာစ
တငျပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သပေေးရတဲ့
လူတှအေခနျးနဲ့ ဖွတျလြှောကျ၃ ၄ခနျးပါပဲ။စကား
ပွောခနျးတခုမှမပါပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ Chowဟာ
Final Justice စတဲ့ဇာတျလမျးတှဲတှမှောဖွတျ
လြှောကျ တခနျးစနှဈခနျးစ လူစားထိုး နဲ့ မွို့သူ
မွို့သားနရောတှေ တခါတလေ ရဲတပျဖှဲ့ကရဲတဦး
မြှအဖွဈသာပါဝငျခဲ့ပွီး ၁၉၈၂ ခုနှဈကနေ ၁၉၈၈
တောငျဇှဲမလြှော့ခဲ့ပါဘူး။ တခါ သူပါတယျဆိုတဲ့
Space Shutt40 ဆိုတဲ့ ၅နှဈခှဲလောကျကွာ
Chow ရဲ့ပထမဆုံးရုပျရှငျကား Final Justice
မှာ ဒုတိယမငျးသားနရောကနေ မငျးသားကွီး
ရခဲ့တဲ့ကားဖွဈသလို 25th Golden Horse
Best New Performer နဲ့ ဟောငျကောငျ
တယျ။ ဒါက စတီဗငျခြောငျဆိုပွီး အာရှရုပျရှငျ
လမျးတှဲတှမှော အရံအဖွဈထပျပါခဲ့ပွီး စတီဗငျ
ကို ၁၉၈၈ခုနှဈမှာပဲ ကွငွောခဲ့ပါတယျ။ဒီကားက
တော့ ၁၉၈၉ခုနှဈ စကျတငျဘာလမှာရုံတငျခဲ့တဲ့
မငျးသားကွီး ဂကျြလီရဲ့ Dragon Fight ရုပျရှငျ
ကားကွီးပါပဲ။ ဒီကားမှာ စတီဗငျခြောငျဟာဇာတျ
Chow ဟာ The Final Combat ကားရဲ့မငျး
သားအဖွဈ TBL ကရှေးခဲ့သလို ၁၉၈၉ခုနှဈမှာပဲ
သူဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဂကျြကီခမျြး - အကျရှငျမငျး
ကမ်ဘာကိုထိုးဖောကျခဲ့သူ ။ စတီဗငျခြောငျ - သူ့ကို
King Of Comedy လို့ဘာကွောငျ့ရုပျရှငျလော
ကကပေးရသလဲ . ဟုတျပါတယျစတီဗငျခြောငျ
ဟာ Mr.Bean လိုပဲ အာရှရုပျရှငျသမိုငျးရဲ့
King Of Comedy အဖွဈမှတျတမျးတငျခံလာ
ဟောငျကောငျရဲ့ Gordon Chanထုတျလုပျ
ပမေယျ့ ဟောငျကောငျဒျေါလာ ၄၄သနျး နီးပါးအ
" ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နှိမျ့ခပြွီး
လူမြိုးရေး အနုပညာ ဘယျအရာမှ
ခြောငျဟာ မငျးသားတဦးအပွငျ စာရေးဆရာတ
ဖူးသူပါ။ မကွာခငျကထှကျခဲ့တဲ့ The Chow
ကငျြရမှာ နငျပြျောမှာမဟုတျဘူး "
Chow ရဲ့ကားအမြားစုဟာ ခှဲထှကျလာတဲ့ပုံစံ
တှဖွေဈခဲ့သလို Rating 6.9 နဲ့ 9ကွားအမွဲရခဲ့
၁၉၉၂ခုနှဈကထှကျခဲ့တဲ့ King Of Beggars။
တယျ။ ဒီကားမှာစာမဖတျတတျတဲ့ လူကွီးသား
တကားပါပဲ။ဒီကားဟာ Chow ရဲ့၁၉၉၀ခုနှဈက
All Of The Winner ကားလိုပဲအောငျမွငျမူ
မြားစှာရခဲ့ပါတယျ။ Tricky Brain - ဒီကားက
$60 mil Man - ဒီကားကလဲအထူးပွောစရာ
ဆို စတီဗငျခြောငျဟာ ရုပျရှငျကား၄၀ကြျောရိုကျ
Action Drama Comedy အစုံအလငျပါဝငျ
ခွငျးပေါ့။ ပထမကားကတော့ ကတြျောတို့ငယျဘ
ခဲ့သလို ကားနာမညျKing of Comedy အဖွဈ
၄၀ထိရခဲ့တဲ့ကားပါ။ဒါ့အပွငျ Hong Kong
Film Awards ကွီးကိုပါရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒုတိယ
ကားကတော့ ဗီဒီယိုရုံက "မှျောဘောလုံး"လို့ပွ
တာကိုကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ Shaolin Soccerကားပါ
ပဲ။ ဒီကားဟာ စတီဗငျခြောငျကိုယျတိုငျ ဇာတျ
လမျး ဒါရိုကျတာ မငျးသားအဖွဈပါဝငျခဲ့တဲ့ကား
Rowan ဆိုတဲ့ Universe ထုတျလုပျရေးက
လာခဲ့တယျ။ ထူးခွားမူကတော့ ဒီကားကွညျ့ဖူးသူ
တိုငျးသိကွမယျ။ Croma နဲ့ Effect သုံးမူ
Steel String အသုံးပွုမူ ရှောငျလငျသိုငျးကို
ကားပါ။ ဒီကားရဲ့ Annimationပိုငျးကိုကိုငျခဲ့
အဖွဈသမိုငျးဝငျခဲ့တဲ့ Avatar ကားကိုတာဝနျယူ
ခဲ့တဲ့ Dante တို့သူငယျခငျြးတစုပါပဲ။ဒီကားဟာ
Best Seller Comedy Bookဖွဈခဲ့ပါတယျ။
" မိသားစု = ကမ်ဘာပျေါမှာအတိုဆုံး
နဲ့ အဓိပ်ပာယျအရှိဆုံး ကဗြာတပုဒျ "
CJ7 လိုသိပ်ပံကားတောငျသူက ဒါရိုကျတာ
အာရှရဲ့ Top10အနုပညာရှငျတှထေဲ ရှာရှတျခနျး
ဂကျြကီခမျြး ဂကျြလီတို့နဲ့အပွိုငျ ကမ်ဘာကိုတိုးနိုငျ
ခဲ့တာပေါ့။ လကျရှိထှကျထားတဲ့ သူဒါရိုကျတာ
လုပျထားတဲ့ The Mermaid ဟာလဲတရုတျ
မှာတငျ အမရေိကနျဒျေါဟာ ၄၀.၉သနျးရရှိပွီး
ကိုလဲ ဝါရငျ့အဘကွီးတှဖွေဈတဲ့ ဂကျြကီခမျြး
ပေါ့။ Journey To The West - အားလုံးသိ
ကွတဲ့Chow ရိုကျကူး ဇာတျလမျးအဖွဈပါလာတဲ့
သူ ဒါရိုကျတာ ဇာတျလမျး ကိုစတီဗငျခြောငျကွီး
က အမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၂၁၅သနျးထိရယူ
ထားပွနိုငျခဲ့တဲ့ကားကွီးပေါ့။ ၂၀၁၃ခုနှဈရဲ့ အောငျ
ရိုကျတာ ဇာတျညှနျး ဇာတျလမျးနဲ့သာလုပျကိုငျ
လာတဲ့ စတီဗငျခြောငျက သူ့တုနျးကကွိုးစားမူ
ပါ။ ဒါတောငျစှနျ့ခှာသှားရငျ ကံတရား
ဘဝငျမွငျ့တာနဲ့ ကရြှုံးမှာပဲ "
Chow ဟာလကျရှိမှာတော့ မငျးသား
အပွငျ ဇာတျလမျးဇာတျညှနျးရေးဆရာ အနုပညာ
အကွံပေး ထုတျလုပျသူ စာရေးဆရာ ဒါရိုကျတာ
ဟာသသရုပျဆောငျနညျးပွ အပွငျ တရုတျအစိုး
ခံထားရသူပါ။ တခြိနျက ဟောငျကောငျပြံကဈြေး
တှရေဲ့ ဒါရိုကျတာ အစိုးရရဲ့အကွံပေးဖွဈလာခဲ့ပါ
ပွီ။ ဒါ့အပွငျ Chow ဟာ Jade Lifetime
Achievement Award ဆုကွီးကိုလဲရရှိခဲ့
Critics Society Awardsဆုတှကေိုပါရရှိ
ထားသူပါ။ ဆုကွီးပေါငျး ၂၆ခုကိုရရှိထားပွီးကမ်ဘာ
Stephen Chow ဆိုတဲ့သူဟာ ဂကျြကီခမျြး
ဂကျြလီ တို့ပါကြျောပွီး တရုတျအနုပညာရှငျတှေ
ထဲအနုပညာကွေးအမွငျ့ဆုံး The highest
paid star of China အဖွဈ ၂၀၁၆ သွဂုတျ
" လူတှကေ မငျးကိုကဲ့ရဲ့လှောငျပွောငျလိမျ့
မယျ။ အထငျသေးကွလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ မငျး
ကိုမငျးမကဲ့ရဲ့မိစနေဲ့ အထငျမသေးမိစနေဲ့ မငျးရဲ့
ဒါဆို မငျးတနေ့ အောငျမွငျလာလိမျ့မယျ။ "
* ခြောငျဟာ ဆငျးရဲသားမိဘကမှေးဖှားခဲ့သူပါ။
* ခြောငျဟာ အနုပညာမြိုးရိုးမရှိပါဘူး။
* ခြောငျဟာ ၇နှဈသားထဲကဟောငျကောငျ
* ခြောငျဟာ မိသားစုနဲ့အတူပြံကဈြေးထဲက
တောငျ ဘာမှမလုပျပေးနိုငျခဲ့လို ရှရေညျစိမျဆေး
* ခြောငျဟာ အထကျတနျးပဲအောငျသူပါ။
* ခြောငျဟာ TVB ညကြောငျးကလှဲရငျဘာ
သိုငျး ဘာအနုပညာသငျတနျး တက်ကသိုလျမှ
* ခြောငျဟာ လကျညညျးညှပျရောငျးသူ စားပှဲထိုး
အလုပျကွမျးသမား ဘဝကနေ ရိုကျကှငျးရဲ့
တောကျတိုမယျရလုပျပေးရသူ မှတဆငျ့ ဖွတျ
လြှောကျ လူစားထိုး အရံ အဖွဈလုပျခဲ့ရပွီး
* ခြောငျဟာ အကျရှငျဟာသလောကရဲ့ ခှဲထှကျ
* ခြောငျဟာ တရုတျရဲ့ဝငျငှအေကောငျးဆုံးကား
* ခြောငျဟာ ဒါရိုကျတာ ဇာတျလမျးရေးဆရာ
သရုပျဆောငျ နညျးပွ အနုပညာအကွံပေး
ထုတျလုပျသူ အပွငျ အစိုးရရဲ့အကွံပေးအရာရှိ
* ခြောငျဟာသူကှယျလှနျခဲ့လြှငျတောငျ သူ့ထုတျ
* ခြောငျဟာ အာရှရဲ့ King Of Comedy ပါ။
* ခြောငျဟာ Chow ဆိုတဲ့မစှမျးမသနျကလေး
* ခြောငျဟာ အာရှရဲ့ထိပျတနျးမငျးသားတဦး
* ခြောငျဟာ ၂၀၁၆ခုနှဈမှာတော့ တရုတျရဲ့
[ Music Review ရေးတဲ့သူဖွဈတဲ့အတှကျ
ဆဲလ်ဂျုံးဘုရင်ကြီး သို့မဟုတ် ကိုးရီးယား အက္ခရာစာလုံ...
ဟန်လူမျိုးတို့၏ အားမာန် - မင်ခေတ်ကို တည်ထောင်ခြင်း။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(200) 农
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(199) 得
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(198) 饭
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(197) 前
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(196) 话
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(195) 本
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(194) 句
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(193) 起
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(192) 少
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(191) 做
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(190) 节
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(189) 条
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(188) 身
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(187) 桥
မွေးနေ့လက်ဆောင် ပို့လျှင် သတိပြုရန် အချက်များ။
သုံးပြည်ထောင်ခေတ် အမတ်ကြီး Cao Cao။
တံခါးပေါ်မှာ နှစ်ကူးစာတွဲကပ်တဲ့ ဓလေ့များ။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြက်နှစ်အကြောင်း။
တရုတ်လူမျိုးတွေက ချစ်သူများနေ့ကို ဆင်နွှဲကြပါသလား။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(186) 石
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(185) 喝
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(184) 米
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(183) 机
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(182) 十
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(181) 成
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(18) 新
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(17) 金
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(16) 年
တီဗီ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ ပေါင်ချိန်။
တရုတ်ချစ်သူများနေ့ 七歹節 (乞歹節)
လျှံစန်းပေါ်နှင့် ကျူ့ ယင်းထိုက်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ။
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(15) 人
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(14) 家
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(13) 事
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(12) 美
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(11) 山
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(10) 中
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(9) 日
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(8) 外
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(7) 海